စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်အတွက်ဂလူးကော့ကိုကိုကိုဒိုက်၏အခန်းကဏ္ (- ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊
တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013; 4: 68 ။
2013 သြဂုတ် 1 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.3389 / fpsyt.2013.00068
Subhashini Srinivasan,1 Masroor Shariff,2 နှင့် Selena အီး Bartlett2,*
တစ်ဦးချင်းစီစွဲလမ်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုစိတ်ဖိစီးမှု၏ maladaptive သက်ရောက်မှုမှသူတို့ကိုတားဆီးကြောင်းအကာအကွယ်ယန္တရားများဖွံ့ဖြိုးဆဲခွငျးအားဖွငျ့ဒဏ်ခံဖြစ်တတ်ရန်သင်ယူဖို့စွမ်းရည်ရှိသည်ထွန်းသစ်စသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ ခံနိုင်ရည်၏ neuroscience ၏ထွန်းသစ်စလယ်ကိုထိုကဲ့သို့သောစွဲအဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှု-related အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါရောဂါများ, ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်သောဆားကစ်နှင့်မော်လီကျူးဖော်ထုတ်မှစတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ Glucocorticoids (GCs) အားလုံးပိုမိုမြင့်မားသက်ရှိနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်နီးပါးတိုင်းကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုနှင့်တစ်ရှူးအတွက်မျိုးဗီဇ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်း Basal နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related homeostasis ၏အရေးကြီးသောအားပြိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။ GCs ထို့ကြောင့်ထွက်ရှိသောစိတ်ဖိစီးမှုမှလိုက်လျောညီထွေမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ဖြစ်စေတည်ရှိပြီးနေကြသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့ Basal နှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိအတွက် hypothalamic-pituitary adrenocortical ဝင်ရိုးနှင့်အပို-hypothalamic ဒေသများတွင် GCs ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ GCs စွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော neurotransmitter နှင့် neuropeptide စနစ်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သည်နှင့်အတူအပြန်အလှန်။ ထို့အပြင်အဆိုပါသုံးသပ်ချက် orexinergic နှင့် cholinergic လမ်းကြောင်းအပေါ်အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စွဲ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ GCs ခံနိုင်ရည်သို့မဟုတ်လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စွဲ၏ကုသမှုများအတွက် maladapted စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်ကိုအရေးကြီးသော pharmacotherapeutic ပစ်မှတ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
keywords: စွဲ, glucocorticoid, စိတ်ဖိစီးမှု, ခံနိုင်ရည်, cholinergic, နီကိုတင်း acetylcholine receptors, mifepristone, orexin
တစ်ခုစွဲဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်မျိုးရိုးဗီဇအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်ပြင်ဆင်ထား၏။ စိတ်ဖိစီးမှုစွဲဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်တိုးမြှင့်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ McEwen ဆွဲဆောင်အားကောင်းလှတဲ့ ( "လူ့တသက်တာအတွေ့အကြုံများစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် allostatic ဝန် / Overload တစ်ပစ်မှတ်အဖြစ်နှင့်ဖိအားဇီဝကမ္မနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုပစ်မှတ်အဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးသည်ဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိလာ" ကြောင်းရေးသားခဲ့သည်1) ။ စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ခံနိုင်ရည်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှစွမ်းရည် (ဒုက္ခအောက်ပါပြန် bounce ဖို့စွမ်းရည်) သိသိသာသာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနောက်ပိုင်းတွင်ထိုကဲ့သို့စိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စွဲလမ်းအဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှု-related အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိခန့်မှန်းထားပါတယ် [အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ် (2)] ။ လူဦးရေရဲ့တစ်ဦးကကြီးမားတဲ့အများစုကသူတို့တစ်သက်တာကာလအတွင်းတစ်ဦးစိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်ကြုံခဲ့ရတယ်။ သို့သျောလညျးကိုသာသေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းနောက်ပိုင်းတွင် (အရက်သို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများမှ Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ (PTSD) သို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှဦးဆောင်နာတာရှည်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်3) ။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, သို့သော်, လူတွေခံနိုင်ရည်ရှိသည်နှင့်ဖိအားထိတွေ့မှုကအောက်ပါရောဂါသို့မဟုတ်ရောဂါမဖွံ့ဖြိုးပါဘူး။ ခံနိုင်ရည်၏ neuroscience ၏ထွန်းသစ်စလယ်ကိုစိတ်ဖိစီးမှု-related အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါရောဂါများဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်မှအစေခံကြောင်းသစ်ကိုဆားကစ်နှင့်မော်လီကျူးများဖုံးကွယ်ထားသည်။
ဒါဟာမကြာခဏခံနိုင်ရည်မပြောင်းနိုင်သည့်ပင်သို့မဟုတ် passive ယန္တရားကြောင်းယူဆခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တိရစ္ဆာန်နဲ့လူသားတို့သုတေသန (ခံနိုင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲတစ်သင်ယူအပြုအမူဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြု2) ။ တစ်ဦးချင်းစီစိတ်ဖိစီးမှု၏ maladaptive သက်ရောက်မှုကနေကာကွယ်ပေးကြောင်းယန္တရားများဖွံ့ဖြိုးဆဲခွငျးအားဖွငျ့ဒဏ်ခံဖြစ်တတ်ရန်သင်ယူဖို့စွမ်းရည်ရှိသည်။ ကြွက်များတွင် Glucocorticoids (GCs) လူသားများအတွက် cortisol, ဒါမှမဟုတ် corticosterone Basal နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related homeostasis ၏အရေးကြီးသောအားပြိုင်မှုဖြစ်ကြပြီး (မြားစှာသောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်တစ်ရှူးအတွက်မျိုးဗီဇတစ်ခုခင်းကျင်း modulate ပြခဲ့ကြ4-6) ။ ထို့ကြောင့် GCs ထွက်ရှိသောစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စွဲတုံ့ပြန် activated လမ်းကြောင်းအချက်ပြတဲ့လူအစုအဝေးထိန်းညှိရန်ချထားပါသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့ Basal နှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိအတွက် hypothalamic-pituitary adrenocortical (HPA) ဝင်ရိုးအတွင်း GCs ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စွဲဖြန်ဖြေနှစ်ခုစနစ်များသည် orexinergic နှင့် cholinergic စနစ်များနှင့်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ် GCs နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏စည်းမျဉ်းတွင်ဤစနစ်များအကြားပေါ်ထွက်လာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးရန်ပါလိမ့်မယ်။ GCs စိတ်ဖိစီးမှုမှခံနိုင်ရည်သို့မဟုတ်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ဖြစ်စေမြှင့်တင်ရန်အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍအဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စွဲ၏ကုသမှုများအတွက် GCs ပစ်မှတ်ထားသော pharmacotherapeutic အခွင့်အလမ်းများကိုဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုဖို့ HPA ဝင်ရိုးတန်းနှင့်ခံနိုင်ရည်များ Neurobiology အတွက် Glucocorticoids ၏အခန်းက္ပ
စိတ်ဖိစီးမှုကိုင်တွယ်ရန်တစ်ခုသက်ရှိရဲ့စွမ်းရည်ကိုအုပ်ချုပ်သောယန္တယားကောင်းကောင်း (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကဲ့ရဲ့တစ်ခုခင်းကျင်းဖို့တုံ့ပြန်မှုအုပ်ချုပ်ကြောင်း stressosomes ဟုခေါ်တွင်အချက်အချာ, အထူးပြုပြီသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိတှငျဖျောပွထားလျက်ရှိသည်7, 8) ။ အဆိုပါ stressosome တိကျစွာတစ်ဖိအားတုံ့ပြန်မှုများ၏ပြင်းအားလစ်လျူရှုသောမော်လီကျူးစက် orchestrates သောဇီဝအတွင်းထူးခြားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ stressosome နောက်ဆုံးမှာဓာတုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအား (တစ်ခုကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဆဲလ်ရှင်သန်မှုသေချာ7, 8) ။ ကစူးရှသောကဖိစီးမှု (တစ် Co-ထုံးစံတုံ့ပြန်မှုပေးသည်အတိုင်း "stressosome" ၏နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေ Correlate သည် HPA ဝင်ရိုးဖြစ်ပါသည်9) ။ ဗဟို HPA ဝင်ရိုး၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများကိုကောင်းစွာသိကြသည်နှင့်အ hypothalamus (PVN) ၏ paraventricular နျူကလိယ၏အာရုံခံ -secreting အဆိုပါ corticotropin-releasing ဟော်မုန်း (CRH) တို့ပါဝင်သည် (10) pituitary adrenocorticotropic ဟော်မုန်း (ACTH) နှင့် adrenal corticosterone (CORT) Secret (လှုံ့ဆော်ကြောင်း11).
Glucocorticoids သည့် adrenal ဂလင်းများကလျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်နဲ့ Basal နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများအတွက် homeostasis ၏အရေးကြီးသောအားပြိုင်မှုတွေဟာဖြစ်ကြောင်း Steroid hormones ဖြစ်ပါတယ်။ GCs intracellular နှစ်မျိုးမှတဆင့်၎င်းတို့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုငါအဲဒီ receptor နှင့်အမျိုးအစား II ကို glucocorticoid အဲဒီ receptor mineralocorticoid အမျိုးအစား receptors ။ နှစ်ဦးစလုံး receptors ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးထုတ်ဖော်ပြောဆိုနှင့် system-ကျယ်ပြန့်သက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုနေကြသည်။ (ဦးနှောက်အတွက်, ကျွန်မအဲဒီ receptor mineralocorticoid မြင့်ဆှဖှေဲ့ type ကို (လည်းကျောက်ကပ်ထဲတွင် aldosterone အဲဒီ receptor ကိုခေါ်), အ hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်အများစုထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်အလယ်အလတ်စကားရပ် prefrontal cortex (PFC) နှင့် amygdala မှာတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်12-14) ။ cortisol ၏ပျံ့နှံ့နေတဲ့အဆင့်ဆင့်မြင့်သောအခါအဆိုပါအနိမ့်ဆှဖှေဲ့အမျိုးအစား II ကို GRs အမြင့်ဆုံးပု PVN အတွက်စကားရပ်နှင့် hippocampus နှင့်အတူဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့်ကြောင့် cortisol ရန်၎င်း၏နိမ့်ဆှဖှေဲ့၏နေကြသည် (စိတ်ဖိစီးမှု-related homeostasis အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍ14-17) ။ GRs နှင့် Mrs receptors (ထို cytoplasm နေထိုင်နှင့်နျူကလီးယားမှတ်တမ်း Active နှင့် repressors အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် GCs ၏ဂန္ထဝင် Genomics လုပ်ရပ်များဖျန်ဖြေ14, 18) နှင့်အမြှေးပါးခညျြနှောငျ GRs GCs ၏လျင်မြန်သောလုပ်ရပ်များဖျန်ဖြေ (19, 20) ။ GCs အရှင်ထွက်ရှိသောစိတ်ဖိစီးမှုမှတုံ့ပြန်မှု modulate မှနေရာယူထားကြသည်နှင့်ကျန်းမာသောအခြေအနေများအတွင်းဦးနှောက်ထဲမှာ activated ခံရစူးရှသောကဖိစီးမှုကအောက်ပါနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုမှတုံ့ပြန်မှုများ၏လိုက်လျောညီထွေနေစဉ်အတွင်း (4, 5, 21).
Glucocorticoids (မိနစ်စက္ကန့်) အစာရှောင်ကျော် inhibitory တုံ့ပြန်ချက်တုံ့ပြန်မှုများကိုကြာကြာ (ရက်ဖို့နာရီ) timescales (4, 18, 22-24) ။ လျင်မြန်စွာသက်ရောက်မှုများ PVN အတွက် corticosterone သို့မဟုတ် dexamethasone ၏လျှောက်လွှာအပေါ်သို့သေးသေးလေး EPSC အကြိမ်ရေအတွက်ကိုချက်ချင်းလျှော့ချရေး (ဒြပ် GC) (ပါဝင်ပတ်သက်နေ25), နှင့်အစာရှောင်ခြင်းတုံ့ပြန်ချက်တားစီးညွှန်ပြ, အမြှေးပါး impermeable dexamethasone အသုံးပြုသောအခါစောင့်ကြည့်လေ့လာမသက်ရောက် ACTH နှင့် corticosterone အဆင့်ဆင့်လျှော့ချ (26) ။ အဆိုပါ hippocampus အတွက် mEPSC အပေါ် corticosterone အလားတူလျင်မြန်သောသက်ရောက်မှု (ရှုလေ့လာခဲ့ကြ27, 28) ။ ထို့ကြောင့်တိုတောင်းသောအချိန်အတိုင်းအတာ (ဖြစ်ကောင်း Non-Genomics) နှင့် GC ၏ကြာကြာအချိန်စကေး (Genomics) လုပ်ရပ်များနှစ်ဦးစလုံးအတူတကွ inhibitory တုံ့ပြန်ချက်ထိန်းချုပ်မှုဖျန်ဖြေ။ passive နှင့်တက်ကြွခံနိုင်ရည်အထောက်အကူပြုသောမော်လီကျူးများနှင့် neurobiological ဖြစ်စဉ်များစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက် HPA ဝင်ရိုး၏အားပြိုင်မှုတွေဟာ, အ synapses ၏ဗိသုကာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မော်လီကျူးများနှင့်အာရုံကြော plasticity နှင့်ဆက်စပ်မော်လီကျူးများပြ [(နေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်2)] ။ GCs အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးနှင့်ထိုကဲ့သို့သော arousal, သိမှတ်ခံစားမှု, ခံစားချက်, အိပ်စက်ခြင်း, ဇီဝြဖစ်ခြင်း, နှလုံးသွေးကြောသေံ, ကိုယ်ခံစွမ်းအားများနှင့်ရောင်ရမ်းတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအများကြီး functions များ, (ပုံ၏အဆုံးထုတ်ကုန်ကိုယ်စားပြု (Figure11).
စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိအတွက် glucocorticoids, orexins, နှင့် cholinergic စနစ်အကြားရှိအပြန်အလှန်၏သိထားကိုယ်စားပြုမှု။ စိတ်ဖိစီးမှုဦးနှောက်နှင့်ပစ်မှတ်သို့အရာထို့နောက်တုံ့ပြန်ချက်သည် adrenal gland ကနေ glucocorticoids များလွှတ်ပေးရန်မြှင့်လုပ်ဆောင် ...
ထပ်ခါတစ်လဲလဲစိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်များနောက်ဆုံးမှာတစ်ခုသက်ရှိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသို့မဟုတ်ရှင်သန်မှုပေးကြာရှည်အပြုအမူသိမြင်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းစသောအပြောင်းအလဲစိတ်ခံစားမှုများနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူတွေကိုသွေးဆောင်။ စိတ်ဖိစီးမှုကိုင်တွယ်ရန်စွမ်းရည်အလှည့်ထိုသို့သောစွဲလမ်းအဖြစ်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းစေခြင်းငှါတစ်ဦးချင်းရဲ့အ HPA ဝင်ရိုးတုန့်ပြန်ပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ သို့သော်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာဒီတုံ့ပြန်ချက်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါမမှန်များ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများအဖြစ် maladaptive syndrome (များ၏အမျိုးမျိုးမှဦးဆောင် dysregulated ဖြစ်လာ1, 5, 29-33) နှင့်အရက်မှီခိုအပါအဝင်စွဲ, (34) ။ ဒါဟာ (နာတာရှည်နှင့်မထိန်းချုပ်စိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့် HPA ဝင်ရိုး၏ dysregulation ပုံမှန်မဟုတ်သော GC လျှို့ဝှက်ချက်များကိုမှဦးဆောင်ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်35, 36) ။ GRs (ထို HPA ဝင်ရိုး၏အဆင့်မှာစိတ်ဖိစီးမှုမှလိုက်လျောညီထွေဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်အပျက်သဘောတုံ့ပြန်ချက်မှတဆင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုရပ်စဲထိန်းညှိ30-32) ။ GCs သည် dynamically (က stochastic ထုံးစံ၌တစ်ရှူး sensitivity ကိုထိန်းညှိနိုင်ပါတယ်5) နှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုမှတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းချုပ်။ GCs အချက်ပြ GRs ပြောင်းလဲပစ်သဖြင့်တစ်ရှူးများနှင့်အင်္ဂါ sensitivity ကိုထိန်းညှိ, ligand ရရှိနိုင်မှု, အဲဒီ receptor isoform စကားရပ်, intracellular စောင်ရေနှင့်ကမကထအသင်းအဖွဲ့ (30-32).
Maladaptive စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်ချက်ထဲမှာ Glucocorticoid receptor: အ Amygdala အတွက်ပလပ်စတစ်အတွက်အပြောင်းအလဲများ၏အခန်းက္ပ
အဆိုပါ amygdala စိတ်ဖိစီးမှု, ကြောက်သောကြောင့်, pavlovian အေးစက် processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအဓိကဦးနှောက်ဒေသဖြစ်တယ်, neuroendocrine အချက်ပြမှုများကိုကြောက်ရွံ့စိတ်ဖိစီးမှု Interactive တို့ကနှိုးဆွပေးရာအရပ်, site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ hippocampal နှင့် amygdalar သင်ယူမှုအကြားချိန်ခွင်လျှာရွေးချယ်မှုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအပြုအမူစိတ်ဖိစီးမှုအဆုံးအဖြတ်များအတွက်အရေးကြီးသောကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီ။ နာတာရှည်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုဟာ basolateral amygdala (BLA) တွင် dendritic တိုးတက်မှုနှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတိုးပွါးနှင့် hippocampus အတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုမတူဘဲ၌တည်ရှိ၏။ အဆိုပါ amygdala သူများအတွက်သော်လည်းနာလန်ထူကာလအတွင်းအခြေခံဖို့ hippocampus ပြန်လာအတွက်အပြောင်းအလဲကြာမြင့်စွာ (ရေရှည်တည်တံ့နေကြ37) ။ BDNF တူသော Neurotrophic အချက်များကဤဦးနှောက်ဒေသများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် Alternative ဖျန်ဖြေ။ လျော့နည်းသွားအဆင့်ဆင့် (ထို hippocampus တွေ့ရှိရသည်သော်လည်းတစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု, BDNF ၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ဟာ BLA အတွက်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်တွေ့သမျှသောသရုပ်ပြ38) ။ ရန်လို interaction ကကနေလွတ်ရာတိရစ္ဆာန်များ (နေထိုင်နှင့်ပြိုင်ဘက်ရင်ဆိုင်ရ) ဆန့်ကျင်ဘက်အပြုအမူစဉ်အခါ, amygdala အတွက် hippocampus နှင့်လျော့နည်းအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုအားကောင်းတဲ့ BDNF စကားရပ်ပရိုဖိုင်းရှိသည်ထင်ရဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ (39) ။ ထို့ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဒေသများတွင် neurotrophic အချက်များမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းမှုစနစ်ကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့စဉ်းစားထားသည်။ အထူး amygdala (CeA) ၏ဗဟိုနျူကလိယထဲတွင်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း၏တစ်ဦးကိုပစ်မှတ်ထားမျိုးဗီဇကိုပယ်ဖျက်အတူကြွက်တွေပေမယ် forebrain အတွက် (conditional ကွောကျရှံ့သောတုံ့ပြန်မှုများကိုယုတ်လျော့မ40) ။ ဆနျ့ကငျြသည်, CeA ဖယ်ထုတ်ပြီး GRs ၏ forebrain နှောင့်အယှက်, ပစ်မှတ်ထားမဟုတ်ပြုလေ၏။ ဒါဟာ BLA အတွက် GRs စိတ်ခံစားမှု noradrenaline နှင့်အတူအပြန်အလှန်အားဖြင့်နှိုးဆွခြင်းနှင့်ကြွက်နှင့်လူသားတွေအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများ၏စုစည်းပြီးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုလူသိများသည်။ လူ့လေ့လာမှုများ noradrenergic လှုပ်ရှားမှုနဲ့ glucocorticoid စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများအကြားအပြန်အလှန်လေ့လှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှုသင်ယူခြင်း (ရန်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ဆောင်ချက်၏အာရုံကြောအခြေခံအတွက်ပြတ်တောက်ထွက်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်မသရုပ်ပြပါပြီ41) ။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်စူးရှသောကဖိစီးမှုကအောက်ပါ, LTP သော induction β-adrenergic နှင့် GRs activation (နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့် BLA အတွက် facilitated ကြောင်းပြသခဲ့သည်42) ။ အတူတူယူ, စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများစဉ်အတွင်းသင်ယူအခြေခံ circuit ကိုတိကျတဲ့အပြောင်းအလဲများကိုစိတ်ဖိစီးမှုမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များစိတ်ဖိစီးမှုမှဒဏ်ခံဖြစ်ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထိုကဲ့သို့သော amygdala အဖြစ်ကိုကွောကျရှံ့-related ဆားကစ်အတွက် Synaptic လှုပ်ရှားမှုပိုမိုတိုးမြှင့်ရှိသည်, ရှိပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုမှတုံ့ပြန်မှုအတွက် Hippocampus နှင့် cortical နေရာများအတွက်ပလပ်စတစ်ထဲမှာ Glucocorticoids Drive ကိုအပြောင်းအလဲများ
ထို့နောက် Glucocorticoid ကျန်းမာအခြေအနေများစဉ်အတွင်း hippocampus ထိန်းချုပ်မှု homeostasis အတွက် receptors နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများတုံ့ပြန် plasticity ပြောင်းလဲမှုများကားမောင်းနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍ (43, 44) ။ နောက်ဆုံးမှာစိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုမှတစ်ဦးချင်းရဲ့အ HPA Response ထိန်းချုပ်ငယ်ဘဝအတွေ့အကြုံများ (ထို hippocampus နှင့်တိုကျရိုကျ cortex အတွက်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းဗီဇစကားရပ်အားဖြင့် modulated နေကြတယ်45) ။ Hippocampal GRs (ထိုCaMKIIα-BDNF-CREB-မှီခိုအာရုံကြော plasticity လမ်းကြောင်း inducing အားဖြင့်ကြွက်များတွင်ရေရှည် inhibitory ရှောင်ရှားခြင်းမှတ်ဉာဏ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အခန်းကဏ္ဍ46) ။ သီးခြားလေ့လာမှုမှာတော့ corticosterone မှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု (တုံ့ပြန်မှုရလဒ်များသင်ယူဖို့ချို့ယွင်းနိုင်စွမ်းအတွက်ရလဒ်47) ။ ဝတ္ထုသတင်းအချက်အလက်မှအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှုကတော့ MR အားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌နေစဉ် memory စုစည်းပြီး, အထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့စဉ်းစားထားသည်။ လူ့ခြင်းနှင့်ကြွက်လေ့လာမှုများစိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများအောက်၌ caudate နျူကလိယ (ကကမကထပြုခဲ့အလေ့အထမှတ်ဉာဏ်ဖို့ hippocampus ကကမကထပြုခဲ့သိမြင်မှတ်ဉာဏ်ထဲက switch ကိုရှိကွောငျးအကြံပြု48, 49) ။ တကယ်တော့, MR receptors အတွက်လစ်လပ်ကြွက် (သို့သော်သူတို့စိတ်ဖိစီးမှုအောက်ပါလှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှုမှတ်ဉာဏ်အားဖြင့်နောက်ထပ်ယိုယွင်းခြင်းမှကယ်ဆယ်ခဲ့ကြ, Spatial မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းပါပြီ50) ။ အလားတူပင်တစ်ခုစူးရှသောဖိအားအောက်ပါ, GRs activated နှင့် NMDARs နှင့် AMPARs (တိုးလာလူကုန်ကူးမှုနှင့် function ကိုအားဖြင့် PFC အတွက် Synaptic plasticity သွေးဆောင်51) ။ အဆိုပါ MR HA-Tagged လူ့ MR cDNA တစ် CAMkIIa ကမကထမောင်းနှင်စကားရပ်ကိုသုံးပြီးကြွက်များ၏ forebrain အတွက် overexpressed သောအခါထို့အပွငျ, ကြွက်, တိုးတက်လာသော Spatial မှတ်ဉာဏ်ပြသခဲ့သည်အခြေခံ HPA စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု (ထဲမှာအပြောင်းအလဲတချို့မပါဘဲစိုးရိမ်စိတ်လျှော့ချ52) ။ GCs စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အရက်၏ဝတ္ထုများမှအကျိုးဆက်တုံ့ပြန်မှုအုပ်ချုပ်ကြောင်းတိကျတဲ့ဆားကစ်အတွက်အမှတ်တရများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြောင်း mounting သက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု (GCs ၏ homeostatic လုပ်ငန်းဆောင်တာမြားတှငျပွောငျးလဲမှဦးဆောင်29) ။ ထို့အပြင်အရက်မှီခိုအောက်ပါ HPA ဝင်ရိုး၏သိသာထင်ရှားသော dysregulation ရှိသေး၏။ ဒါဟာ (ထို HPA ဝင်ရိုး၏ dysregulation မှဦးဆောင်သည့်အရက်မှီခိုအကြံပြုခြင်းတစ်တုံးတုန့်ပြန်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်စူးရှသောမိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး corticosterone အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးကြောင်းကြွက်ရလဒ်များကိုအတွက်ရေရှည်အီသနောထိတွေ့မှုပြသထားသည်53) ။ ငယ်ရွယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း၏ယာယီ overexpression (လိုအပ်သောနှင့်အလွဲသုံးစားမှုလေးနက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှအားနည်းချက်အတွက်ရာသက်ပန်တိုးမှဦးဆောင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများအတွက် transcriptome ပြောင်းလဲမှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်. ယူလာဘို့အလုံလောက်သောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်54) ။ ပြုပြင်ထားသောမှတ်တမ်းထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းနှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်အချက်ပြ dentate gyrus နှင့် dopamine အဲဒီ receptor အတွက် axon လမ်းညွှန်မှုအချက်ပြ (NAc) (ထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ54) ။ ထို့အပြင်အချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာထိတွေ့ပြီးနောက် GCs စက်လှေကားမူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်စိတ်မချရ HPA ဝင်ရိုးသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ GCs အဆိုပါ mesolimbic dopamine ဆုလာဘ် / အားဖြည့် circuitry အတွင်း dopamine ဂီယာအပေါ်လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများနှင့်အတူဖြတ်ကျော်-sensitize နိုင်ပါတယ် (55) နှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်တိုးမြှင့် (56-58) dopaminergic synapses ၏ Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် (59) ။ အရေးကြီးတာက, အ dopamine အဆိုပါ NAc core ကိုအတွက်တုံ့ပြန်မှု, ဒါပေမယ့်မ shell ကို, (GCs ၏ပွောငျးလဲနေသောအဆင့်ဆင့်တုံ့ပြန်ရန်ပြသပြီ60) ။ dopaminergic input ကိုလက်ခံရရှိကြောင်း dopamine D1 receptors ဖော်ပြအထူးသ dopaminergic အာရုံခံအတွင်းကြွက်များတွင်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းမျိုးရိုးဗီဇအတွက်ချို့တဲ့ (ပစ်ခတ်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် dopamine ဆဲလ်လျော့နည်းသွားခဲ့သည်61) ။ acute ထိတွေ့မှုသို့မဟုတ်မူးရူးကဲ့သို့အီသနောထိတွေ့မှု (GC အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် PFC GC-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဗီဇစကားရပ်မြှင့်တင်ရန်62) နှင့်အမျိုးအစား II ကို GRs အပေါ်မှီခိုကြောင်း neurodegeneration (63) ။ GCs (အတွင်းပြန်လည်သုံးသပ်အီသနောမှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအခြေခံမှအဆိုပြုထားခဲ့ကြကြောင်း glutamatergic synapses ၏အီသနောဆက်စပ် plasticity, သွေးဆောင်64).
အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအရက် abstinence အဆိုပါ NAc core ကိုအတွက် upregulated ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း mRNA ဆက်နွယ်နေကြောင်းနေချိန်မှာဒါဟာ ventral, NAc, အ PFC အတွက်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း mRNA ၏စူးရှသောအရက်ရုပ်သိမ်းရေးနှင့် downregulation အကြားဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းပြသလျက်, stria terminalis (BNST) ၏အိပ်ရာနျူကလိယထားပြီး BNST နှင့် CeA (65, 66), (အတွင်းပြန်လည်သုံးသပ်67) ။ နောက်ဆက်တွဲ compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှကနဦးမိမိဆန္ဒအလျောက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအကူးအပြောင်း (အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအပြုအမူ၏လေ့ထိန်းချုပ်မှုမှဂိုးညွှန်ကြားနေတဲ့ switch ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အဆိုပြုပြီးပါပြီ68) ။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးစူးရှသောဖိအားမူးယစ်ဆေး-related တွေကိုနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်လေ့မိမိဆန္ဒအလျောက်အနေဖြင့်မသင်မနေရမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအကူးအပြောင်းမြှင့်တင်ရန်စခွေငျးငှါပြန်လည်ကြောင်းတင်ပြသည်။ GCs ထွက်ရှိသောစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု modulate ကြောင်းစနစ်များကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားခင်းကျင်းထိန်းညှိဖို့နေရာယူထားကြသည်။ အောက်ပါကဏ္ဍများအတွက်ကျနော်တို့ GCs နှင့် orexinergic နှင့် cholinergic စနစ်များအကြားဆက်စပ်မှုတွေပြန်လည်သုံးသပ်။
အဆိုပါ Orexinergic စနစ်
orexins / hypocretins ၏အများဆုံးလေ့လာခဲ့ဇီဝလုပ်ငန်းဆောင်တာနို့တိုက်ကျွေးရေး, အိပ်စက်ခြင်း, စွမ်းအင် homeostasis နှင့်ဆုလာဘ်-ရှာ၏ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု၌ရှိကြ၏။ Orexin-A နှင့် orexin-B က (စ hypocretin-1 နှင့် -2 ခေါ်) နှစ်ခု orexin / hypocretin အဲဒီ receptor Subtype နှင့်အတူအပြန်အလှန်, အ Orexin1 receptor (OX1R) နှင့် Orexin2 ဒါမှမဟုတ် orexin-A နှင့် orexin-B က (နှစ်ဦးစလုံးမှခညျြနှောငျရာ receptor (OX2R)69, 70) ။ orexins ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်ကနဦးတွေ့ရှိချက် (အိပ်ပျော်ခြင်းမနိုး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် ORX / Hcrt စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍ implicating, ထိုမျိုးဗီဇအတွက်ချို့တဲ့၏မှတ်ပုံတင် encoding က orexin သို့မဟုတ်ခွေးတစ်ကောင် narcolepsy အတွက်ရရှိလာတဲ့အတွက် OX2R အဲဒီ receptor ဖြစ်စေနှင့်အတူအကြောင်းကို လာ. ,71, 72) ။ Orexin-A နှင့် orexin-B က (ရွေးချယ်ရန်ပိတ်ဆို့ကြောင်းအစားအစာစားသုံးမှုတိုးမြှင့်ပြသပြီ73, 74) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, orexinergic အမျှင်ထိုကဲ့သို့သော ventromedial hypothalamic နျူကလိယက, arcuate နျူကလိယကို၎င်း, hypothalamus ၏ PVN (အဖြစ်, စွမ်းအင် homeostasis တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အမျိုးမျိုးသောဦးနှောက်ဒေသများ innervate75) ။ Orexins (ထိုကဲ့သို့သောသွေးပေါင်ချိန်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းအဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ functions များ, ထိန်းညှိ76) ။ ဤ neuropeptides စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်ရန်ထူးခြားတဲ့အနေအထား၌ရှိကြ၏။
အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးတန်း၏စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့် Activation အတွက် Orexins ၏အခန်းက္ပ
arousal စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏အရေးပါသောဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့် orexin စနစ်ကစိတ်ဖိစီးမှုဖို့တုန့်ပြန်နေတဲ့သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ perifornical နျူကလိယနှင့် hypothalamus ၏ dorsomedial နျူကလိယကနေ projections ကိုလည်းသို့သော် arousal နှင့် concomitant စိတ်ဖိစီးမှုအတွက်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍအဓိကအာရုံစိုက် (ခဲ့ပြီ, စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနေကြတယ်77) ။ Orexins ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အတွက် HPA ဝင်ရိုး modulate ။ Prepro-orexin mRNA စကားရပ် (အအေးစိတ်ဖိစီးမှုအောက်ပါရွေ့စိတ်ဖိစီးမှုအောက်ပါငယ်ရွယ်ကြွက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus (LH) တွင်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်78) ။ နွားကို-တစ်ဦးက ACTH နှင့် corticosterone (များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကို inducing အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်79) ။ နွားကို-တစ်ဦးမဟုတ်, နွား-B က, (ထို adenylate cyclase-မှီခိုအဆငျ့ဆငျ့မှ coupled OX1R မှတဆင့် adrenocortical ဆဲလ်များ၏တိုက်ရိုက်ဆွခြင်းဖြင့်ကြွက်နှင့်လူ့ adrenal cortical ထံမှ glucocorticoid လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတိုးပွားစေ79) (ပုံ (Figure1) .1) ။ နွားကို-တစ်ဦးကတိုးမြှင့် ACTH နှင့် corticosterone လွှတ်ပေးရေး Intracerebroventricular (ICV) အုပ်ချုပ်ရေး (80-82) ။ ဒါဟာ orexin အာရုံခံတိုက်ပွဲ-or-ပျံသန်းတုံ့ပြန်မှု (စဉ်အတွင်း arousal နှင့် / သို့မဟုတ်သတိဝီရိယမှကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Integrated အခန်းကဏ္ဍကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီ83) (ပုံ (Figure22).
Glucocorticoid, orexinergic နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းထဲမှာပါဝင်ဦးနှောက်ဒေသ cholinergic activation။ အဆိုပါ hippocampus နှင့် amygdala အတွက် Glucocorticoid receptors စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအမှတ်တရများ၏စုစည်းပြီး၏သက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေ။ GCs လည်း ...
စွဲလမ်းမှုအတွက် Orexins ၏အခန်းက္ပ
orexins ဖွငျ့ဖျြောများစွာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတူအရှိဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကျိုးကိုစနစ်ဟာသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) နှင့် NAc ဖို့ LH ထံမှ Orexin ်အာရုံခံစီမံကိန်းကိုသည် mesolimbic "ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း" ပါဝင်သောဦးနှောက်ဒေသများ (84-86) ။ OXRs မကြာသေးမီကထိုကဲ့သို့သောမော်ဖင်းအကိုက်, ကင်း (အဖြစ်စွဲလမ်းတ္ထုများများအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုး drive ကိုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ87-91) နှင့်အရက် (92-97) ။ အဆိုပါ OX1R (အတွင်းပြန်လည်သုံးသပ်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအခန်းကဏ္ဍ, cue နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse ကစား98) OX2R များအတွက်ပိုမိုကန့်သတ်အခန်းကဏ္ဍပြသထားကြောင်းနှင့်အတူ (99) ။ အဆိုပါ orexin စနစ်ကအစမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှ relapse အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ အဆိုပါ OX1R (ကိုကင်း၏ခြေလျင်-shock စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အတွက်အခန်းကဏ္ဍ100, 101) နှင့် cue နဲ့ yohimbine အီသနော-ရှာကြံ (၏ reinstatement သွေးဆောင်94, 96, 102).
ဗဟို amygdaloid အဆိုပြုချက်များကယင်း HPA ဝင်ရိုးနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက်အာရုံခံ် innervate orexin ထိန်းညှိ။ အဆိုပါ CeA, BNST, နှင့် NAc ပါဝင်သောအဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala ထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်စိတ်, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုအပြုအမူတွေကို process ကြောင်းဝေဖန်ဦးနှောက်ဧရိယာများဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်, ထို CeA နှင့် BNST (အနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်-related အပြုအမူတွေအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုကစားရန်ပြသပြီ103) ။ အဆိုပါ CeA အပါအဝင်တိုးချဲ့ amygdala, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ reinstatement အပြုအမူအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပြသလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ CeA ၏ Inactivation, ဒါပေမယ့်မ BLA, (ကိုကင်း-ရှာ၏ခြေလျင်-shock-သွေးဆောင် reinstatement ကာကွယ်ပေးသည်104) ။ သိပ်သည်း orexinergic innervation လည်း (ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်လေ့လာတွေ့ရှိဖြစ်ပါတယ်76, 105, 106) ။ ဤရွေ့ကားဦးနှောက်ဒေသများတွင်လည်းထိုကဲ့သို့ဖြန့်ချိအချက် (CRF) နှင့်ထိုကဲ့သို့သော neuropeptide Y ကို (NPY) အဖြစ်ဆန့်ကျင်စိတ်ဖိစီးမှု peptides corticotrophin အဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှု peptides ဖော်ပြ။ ဤအ neuropeptides အဆိုပါ CeA အတွက်ဆန့်ကျင်လုပ်ရပ်များရှိသည်နှင့်အီသနောစားသုံးမှုထိန်းညှိနှစ်ဦးစလုံး။ လူမှုရေးအပြန်အလှန်စမ်းသပ်မှုနှင့်မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္စမ်းသပ်မှုဖြင့်တိုင်းတာနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု NMDA receptors (ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အဖြစ် BNST သို့နွားကို-တစ်ဦးကတာဟာတုံ့ပြန်မှုများကဲ့သို့စိုးရိမ်စိတ်ထုတ်လုပ်ရန်107) ။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုလည်း yohimbine orexinergic တုံ့ပြန်မှုမြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းသရုပ်ပြ, ဒါပေမယ့် adrenergic မဟုတ်အဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှုနှင့်ငွိမျးကင်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (၏ reinstatement မှလှူဒါန်းခဲ့သော BNST အတွက်စိတ်ဓာတ်ကျ excitatory neurotransmission108) ။ အရှင် orexinergic စနစ်သည်ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်မျိုးစုံဦးနှောက်ဒေသများစုဆောင်းလေ့ကျင့်အဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူဖြန်ဖြေအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ ဒါဟာစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆုလာဘ်စနစ်များအကြားထပ်တူအတွက် orexins ၏အလှူငွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse ဖျန်ဖြေကြောင့်ဆားကစ်ဖော်ထုတ်ခြင်းစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေး relapse များအတွက်လျာထားသော pharmacotherapeutic ချဉ်းကပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ dual-orexin အဲဒီ receptor ရန်, suvorexant (109) ကိုအောင်မြင်စွာမူလတန်းအိပ်မပျော်ကုသအဆင့် III ကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေပြီးစီးခဲ့နှင့် FDA ကပြန်လည်သုံးသပ်အောက်မှာလက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ အတည်ပြုခဲ့လျှင်ဤအိပ်ပျော်ခြင်း-မမှန်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စွဲလမ်းမမှန်ကုသ၎င်း၏ထိရောက်မှုတို့အတွက် repurposed ခံရဖို့အလားအလာရှိပါတယ်ကုသမှုအတွက်ရှိနိုင်ပါပထမဦးဆုံး FDA က orexin ရန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ Cholinergic စနစ်နှင့် HPA ဝင်ရိုးတန်းများအကြားဆက်သွယ်မှုသည်
Allostasis, homeostasis စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ပြန်သောအားဖြင့်တစ်ဦးဖြစ်စဉ်ကို (HPA ဝင်ရိုးမှတဆင့် PFC, amygdala တို့နှင့် hippocampus အကြားအပြန်အလှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်110-113) ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ထိုကဲ့သို့ acetylcholine, အချိုမှုများနှင့်ဂါဘမြို့သားအဖြစ် neurotransmitters နှင့် neuromodulators တစ်အရေအတွက်, differential Module ဖြစ်ပြပြီ။ ဤတွင်ကျနော်တို့မှတုံ့ပြန်အတွက် cholinergic လမ်းကြောင်း၏အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်ပတ်သက်မှု, တည်တံ့ခိုင်မြဲနှင့်ပင်ပိုမိုဆိုးဝါးစိတ်ဖိစီးမှုပြန်လည်သုံးသပ်။
အဆိုပါ cholinergic လမ်းကြောင်း၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည် - ထို ligand, acetylcholine (ACH); acetylcholine, acetylcholinesterase (နာ) ၏ပျက်ပြားများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အင်ဇိုင်း; ACH, choline acetyltransferase (Chat) synthesizing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အင်ဇိုင်း; နှင့်ယင်း acetylcholine receptors, နီကိုတင်း acetylcholine အဲဒီ receptor (nAChR), နှင့် muscarinic acetylcholine အဲဒီ receptor (mAChR) ။ ကျနော်တို့နီကိုတင်းအဲဒီ receptor အပေါ်အထူးအာရုံစိုက်နေကြသည် - nAChR - စိတ်ဖိစီးမှုဖို့ cholinergic တုံ့ပြန်မှုစပ်လျဉ်း။ ယင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းအားဖြင့် nAChR-cholinergic လမ်းကြောင်းဒါကြောင့် nAChR စိတ်ဖိစီးမှုဖို့သာသို့မဟုတ်တစ်ဦးထက်ပိုအရေးကြီးသောကစားသမားဖြန်ဖြေတုံ့ပြန်မှုကြောင်းအကြံပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအစား, ကဤသုံးသပ်ချက်ကိုကို (HPA ကနေတဆင့်ကမကထပြုခဲ့) ကို glucocorticoid လမ်းကြောင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုမှ ဆက်စပ်. အတွက် nAChR-cholinergic လမ်းကြောင်း၏ interaction ကမီးမောင်းထိုးပြကြောင်းရည်ရွယ်သည်။
ဒါဟာကောင်းစွာ (ထို nAChRs သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုလူသိများသည်114, 115) ။ ထို့အပြင်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု၏ဆိုးကျိုးများကိုလည်းကောင်းစွာ (ထူထောင်နေကြ116, 117) ။ အမှန်စင်စစ်အဖြစ်အစောပိုင်း 1968 သကဲ့သို့, hippocampus စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း (များအတွက်ပစ်မှတ်ဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရ118) (ထို hippocampus သို့ဖြန့်ချိ acetylcholine ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ119, 120) (အမျိုးမျိုးသောစိတ်ဖိစီးမှုမော်ဒယ်များအောက်မှာတိုးလာ121) ။ Transgene mouse ကိုခေါက်ထွက်မော်ဒယ်များ (အα4၏အရေးပါမှုကိုပြသကြ122), β3 (123), နှင့်β4 (124စိတ်ဖိစီးမှုများ anxiogenic သက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေအတွက်) nAChR subunits ။ ထို့ပြင်α5နှင့်β4ခေါက်ထွက်ကြွက် (နီကိုတင်းမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံများမှာ125, 126), တစ်ဦးအစွမ်းထက် anxiolytic အေးဂျင့် (127-129) အနိမ့်ဆေးများ (မှာ130) ။ အမှန်စင်စစ်နီကိုတင်း၏အဓိကပစ်မှတ်နေသောα7နှင့်α4β2 nAChRs, (hippocampus-မှီခိုမှတ်ဉာဏ်၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ချို့ယွင်းအတွက်နီကိုတင်း-mediated အာရုံကြောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပြသထားသည်131) ။ အဆိုပါ hippocampus အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုး (တခုတခုအပေါ်မှာ inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုပြထားပြီ132-136), အရှင်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားသည် nAChR differential က၎င်း၏အမျိုးမျိုးသော subunits မှတဆင့်စိတ်ဖိစီးမှုမှတုံ့ပြန်မှု orchestrate ပုံရသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု activation CRH, ACTH, နဲ့ Cortisol ၏တန်းဒေသတွေ efflux ကြောင့်ဖြစ်သည်။ နီကိုတင်း, nAChRs မှာအစွမ်းထက် ligand, အတော်လေးမြင့်မားသောဆေးများ (2.5-5.0 μg / ကီလိုဂရမ်) တွင် (ACTH တစ်ထိုး-မှီခိုတိုးထုတ်လုပ်ပြသထားသည်137), နှင့်၎င်း၏ရန်, mecamylamine, (နီကိုတင်း-နှိုးဆွ ACTH လွှတ်ပေးရန်ပိတ်ဆို့ဖို့ပြသထားသည်137, 138) ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ, CRH-mediated ACTH လွှတ်ပေးရန်အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဒေသတွင်း (ထို hypothalamus ၏ PVN (pcPVN) ၏ parvocellular ဒေသဖြစ်ပါသည်139, 140) ။ ဒါဟာသို့သော်နီကိုတင်းဟာနျူကလိယ Tractus solitarius (NTS) (ပေါ်နီကိုတင်း receptors ကနေတဆင့်, သွယ်ဝိုက် ACTH လွှတ်ပေးရန် mediates ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်141, 142) ။ အဆိုပါ NTS နောက်ပိုင်းတွင် (ထို pcPVN မှအမျိုးမျိုးသော afferents ကနေတဆင့်အရေးယူအလားအလာ mediates143, 144) ။ အဆိုပါ NTS အတွက် nAChR (ထို pcPVN မှ glutamatergic စီမံချက်များအပေါ် Pre-Synaptic တွေ့ရှိ145, 146) ။ ထို့ပြင်ဒီလမ်းကြောင်းအတွက် ACTH များ၏နီကိုတင်း-mediated ဆိုးကျိုးများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည့် nAChR subunits အဆိုပါβများမှာ4-containing nAChRs (အများဆုံးဖွယ်ရှိα3β4*) ဒါပေမယ့်မα4β2 DHβE၏ရှေ့မှောက်တွင်တစ်အစွမ်းထက်αအတွက် mEPSCs ၏တိုင်းတာဆုံးဖြတ်အဖြစ်4β2 inhibitor သို့မဟုတ် cytisine တစ်အစွမ်းထက်β4*-nAChR agonist (146) ။ ထို့ကြောင့်αစဉ်4β2 နှင့်α7 nAChR subunits (တခြားနေရာနီကိုတင်း-mediated အခန်းကဏ္ဍ modulate131), အ NTS ၌ (ကကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲတစ်ခုဖြစ်သည်146), စိတ်ဖိစီးမှုတစ် nAChR-based differential ကိုမော်ဂျူမှတဖန်ညွှန်ပြ (ပုံ (Figure11).
အဆိုပါ Cholinergic စနစ်နှင့်အတူ Glucocorticoid ဆက်သွယ်မှုသည်
Glucocorticoids (တိုက်ရိုက် nAChR လှုပ်ရှားမှုတားစီးပြခဲ့ကြ147-149) ။ ဤသည်စိတ်ဖိစီးမှု (ထိုကြွက်နှောက် cortex နဲ့ midbrain အတွက် nAChR တစ်ဦးနှိမ့်ချစည်းမျဉ်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသောအချက်ကိုကထောက်ခံနေသည်150) ။ ထို့အပြင် Steroid တစ်မျိုးရန် (nAChR စကားရပ် upregulate ပြခဲ့ကြ151) ။ GCs တိုက်ရိုက်အဲဒီ receptor binding သို့မဟုတ်စကားရပ်အဆင့်ဆင့်၏အပြောင်းအလဲတချို့မှတဆင့် nAChR လှုပ်ရှားမှုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုငျသောαကူးယူရေးသားခြင်းဗီဒီယိုမျိုးဗီဇအပေါ် glucocorticoid တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် (GRE) ၏ရှေ့တော်မှောက်နေဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်7 အဆိုပါ nAChR ၏ subunit - CHRNA7 (152) ။ အမှန်စင်စစ် GREs လည်း (Chat များအတွက်ဗီဇအပေါ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ153) နှင့်နာ (154), အ cholinergic လမ်းကြောင်း၏အစိတ်အပိုင်းများကို။ နောက်ထပ်သုတေသနကဤ GRE အခြား nAChR မျိုးဗီဇအပေါ်ပစ္စုပ္ပန်လျှင်စုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်အတူဒီလမ်းကြောင်းများတွင်ဤ GREs ၏တိကျသောသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်လိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ cholinergic လမ်းကြောင်း၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုအရမ်းစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ထိခိုက်ခံရဖို့ပြသခဲ့ကြသည်။ ACH ၏အချိန်မီပျက်စီးခြင်းအဘို့တာဝန်ရှိနာ, (အရှင် neurotransmission ပြုပြင်မွမ်းမံအခြားရွေးချယ်စရာ splicing မှတဆင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခံရဖို့ပြသထားသည်155) ။ ယင်း၏ပုံမှန်အတိုင်းနာ-S ကမှအဖတ်-မှတဆင့်သဏ္ဍာန်နာ-R ကို (cholinergic ဂီယာပွောငျးလဲမှနာ၏အမှန်စင်စစ် miRNA Post-မှတ်တမ်းပြုပြင်မွမ်းမံ156) ။ ထို့အပြင်နာ၏ Post-မှတ်တမ်းမော်ဂျူ, တဖန် miRNA ကနေတဆင့်, (hippocampal-related သိမြင်မှုချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်157) ။ အစောပိုင်းကဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းနာစကားရပ်ပါ GRE မှတဆင့် Genomics အဆင့်မှာထိန်းချုပ် (154) Chat (ဖြစ်သကဲ့သို့153) ။ ဒါ့အပြင် chat ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့် (ကြောင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုမှလျော့ချဖို့ပြသခဲ့ကြသည်158) ။ အဆိုပါဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအဆင့်မှာ, HDAC4 မှတဆင့်နာ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုမှတ်တမ်းမှတ်ဉာဏ် (ရှိ159) ။ စိတ်ဝင်စားစရာကဒီလေ့လာမှုအတွက်ပါ GRE လည်း (HDAC4 အပေါ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်159), နာအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏တိုက်ရိုက်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအကြံပြုခြင်း။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ရလဒ်များစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် cholinergic တုံ့ပြန်မှုခြောထိုကဲ့သို့သော PTSD (အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောစိတ်ဖိစီးမှု-related neuropathologies ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုများ၏ Over-ပီသသောမရှိဘဲစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်မထွက်ရတဲ့ဘက်စုံယန္တရားထောက်ပြ160, 161), အရက်စွဲ (162, 163), နှင့်အလွဲသုံးစားမှု၏အခြားတ္ထုများမှစွဲလမ်း (164, 165).
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာတစ်ဦးထု modulated စနစ်အဖို့ထိုကဲ့သို့သောမှတ်တမ်း, Post-မှတ်တမ်းနှင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြုပြင်မွမ်းမံအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအဆင့်မှာ cholinergic လမ်းကြောင်း၏မော်ဂျူနှင့်အတူဦးနှောက်၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများအတွက် nAChR ၏ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု, အမှတ်နှစ်ခုလုံးကိုယာယီနှင့် Spatial ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ဘဝများတွင်ကြုံတွေ့ရသောအမျိုးမျိုးသောဖိအားတုံ့ပြန်ရန် attuned ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသုံးသပ်ချက် nAChR နှင့် cholinergic လမ်းကြောင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေနောက်ဆုံးအနေနဲ့သည်, muscarinic အဲဒီ receptor နှင့်များပြားလှသည်အခြားအာရုံကြောဆားကစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်စင်စစ်သုတေသန၏ဤ field ရဲ့အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်လုံလုံလောက်လောက်နောက်ဆုံးမှာစိတ်ဖိစီးမှုဆန့်ကျင်ကပိုထိရောက် pharmacotherapeutic မဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မှတဆင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ရောဂါ၏လျှော့ချရေးကို enable တံ့သောအမျိုးမျိုးသောလမ်းကြောင်းနှင့်အာရုံကြောဆားကစ်များအကြားအနုစိတ်ဆက်စပ်မှုတွေနားလည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားများ II ကို GRs maladaptive စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကနေဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမမှန်များ၏ကုသမှုများအတွက်အရေးကြီးသောကုထုံးပစ်မှတ်ဖြစ်ကြောင်း type ကိုသရုပ်ပြတည်ရှိ။ Mifepristone လည်း RU486 အဖြစ်လူသိများသည် 19-norprogestin norethindrone တစ်ဆင်းသက်လာသည်နှင့်အစွမ်းထက်အမျိုးအစား II ကို GRs နှင့်အဓိကချို့ယွင်း receptors (ခွင်) နဲ့ယှဉ်ပြိုင်။ Mifepristone (အီသနော-ရှာ၏ reinstatement လျှော့ချရန်ပြသခဲ့ပြီးနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၌သောက်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်66, 166) ။ ထို့အပွငျ mifepristone (စိတ်ကြွဆေး၏ Self-အုပ်ချုပ်မှုလျှော့ချမှာထိရောက်သောဖြစ်ပြထားပြီး167), ကိုကင်း (168, 169), မော်ဖင်းအကိုက် (170) နှင့်အီသနော (57, 66, 162, 166, 171-175) ။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုလည်း (အရက်၏ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေလျှော့ချအတွက် mifepristone ၏ထိရောက်မှုကိုပြသ176) ။ mifepristone ၏ Anti-glucocorticoid လှုပ်ရှားမှုကကုရှင့်ရောဂါများအတွက်အလားအလာကုသမှု (ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ177) နှင့်အာရုံကြောနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်း (178-183) ။ Mifepristone ယာယီနာတာရှည်နှင့်ရေရှည်အရက်သောက်အောက်ပါ maladapted ဖြစ်လာသည်သောစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုစနစ်က reset ဖို့အလားအလာလမ်းပေးထားပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှသင်ယူခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုလမ်းကြောင်းအုပ်ချုပ်ကြောင်းဦးနှောက်ဆားကစ်အတွက် plasticity ၏ပြောင်းလဲနေသောစည်းမျဉ်းပါဝငျသညျ။ ဦးနှောက်အတွေ့အကြုံနှင့်အာရုံကြောဆားကစ်များက remodeled နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ချက်နဲ့နှင့်သည် dynamically စညျးမဉျြးစညျးကမျးဖြစ်ကြောင်း, ဒီကဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့်စွဲကျော်လွှားပြီးပိုဒဏ်ခံဖြစ်လာရန်လေ့လာသင်ယူဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်ဖြစ်နိုင်အကြံပြုထားသည်။ ခံနိုင်ရည်အုပ်ချုပ်သောမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းနှင့်ဆားကစ်တဖြည်းဖြည်းအဝတ်မခြုံဘဲလျက်ရှိသည်နှင့်ဤလိုလားသူခံနိုင်ရည်လမ်းကြောင်းပစ်မှတ်ထားကြောင်းဖြစ်နိုင်သမျှဝတ္ထု pharmacotherapeutic မဟာဗျူဟာများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဦးနှောက်အပေါ်စွဲလမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျော်လွှားကြောင်းဝတ္ထုမဟာဗျူဟာများဖော်ထုတ်ဘို့အခွင့်အလမ်းပေးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်း system ကို-ကျယ်ပြန့်တုံ့ပြန်ချက်များကိုဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုမွေးမွနျးနှင့် reset မျှော်တစ်လမ်းပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်အဖြစ်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုခုနှစ်, ငါတို့သည် glucocorticoid ဟော်မုန်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှု၏ deleterious သက်ရောက်မှုအနေဖြင့်ကာကွယ်ပေးရန်အသုံးချကြောင်းယန္တရားများအုပ်ချုပ်သောမော်လီကျူးယန္တရားများကိုနားလည်ခြင်းမှ neuroscience အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာလမ်းသစ်တွေပေးလိမ့်မယ်။
ဤလုပ်ငန်းကိုအဆိုပါ ARC အနာဂတ် Fellowship (Selena အီး Bartlett) မှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကထောက်ခံခဲ့သည်။
1 ။ McEwen BS ။ စိတ်ရောဂါမမှန်များ၏ pathophysiology မှ allostasis နှင့် allostatic Overload နှင့်ဆက်စပ်မှု: စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ (2004) 1032: 1-710.1196 / annals.1314.001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
2 ။ Russo SJ, Murrough JW, ဟန် MH, Charney DS, Nestler EJ ။ ခံနိုင်ရည်၏ Neurobiology ။ နတ် neuroscience (2012) 15: 1475-8410.1038 / nn.3234 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
3 ။ Nechvatal JM, လီယွန် DM ။ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience (2013) 7: 13.10.3389 / fnbeh.2013.00013 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
4 ။ de Kloet ER, Vreugdenhil အီး, Oitzl က MS, ကျန်းမာရေးနှင့်ရောဂါအတွက် Joel အမ်ဦးနှောက် corticosteroid အဲဒီ receptor ဟန်ချက်။ Endocr ဗြာ (1998) 19: 269-30110.1210 / er.19.3.269 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
5 ။ Kino တီတစ်ရှူး glucocorticoid sensitivity ကို: glucocorticoids များ၏မတူကွဲပြားလုပ်ရပ်များအပေါ် stochastic စည်းမျဉ်းထက်ကျော်လွန်။ Horm Metab Res (2007) 39: 420-410.1055 / s ကို-2007-980193 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
6 ။ McEwen BS, De Kloet ER, အာရုံကြောစနစ်အတွက် Rostene ဒဗလျူ Adrenal Steroid တစ်မျိုး receptors နှင့်လုပ်ရပ်များ။ Physiol ဗြာ (1986) 66: 1121-88 [PubMed]
7 ။ stressosome activation ၏ Liebal UW, Millat T က, Marles-Wright J ကို, Lewis က RJ, Wolkenhauer O. Simulator RsbR နှင့် RsbT အကြား allosteric interaction ကအလေးပေး။ BMC Syst Biol (2013) 7: 3.10.1186 / 1752-0509-7-3 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
8 ။ et al Marles-Wright J ကို, Grant က T က, Delumeau အိုဗန် Duinen, G, Firbank SJ, Lewis က PJ ။ သည် "stressosome" ဟုအချက်ပြပေါင်းစည်းမှုနှင့် transduction အချက်အချာ၏မော်လီကျူးဗိသုကာ။ သိပ္ပံ (2008) 322: 92-610.1126 / science.1159572 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
9 ။ Selye အိပ်ချ်လိုက်လျောညီထွေများအတွက် adrenals ၏အရေးပါမှုကို။ သိပ္ပံ (1937) 85: 247-810.1126 / science.85.2201.247 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
10 ။ Herman JP, Figueiredo H ကို, Mueller NK, Ulrich-လိုင် Y ကို, et al Ostrander MM, Choi, DC, ။ စိတ်ဖိစီးမှုပေါင်းစည်းမှု၏ဗဟိုယန္တရားများ: hierarchical circuitry hypothalamo-pituitary-adrenocortical တုန့်ပြန်ထိန်းချုပ်။ တပ်ဦး Neuroendocrinol (2003) 24: 151-8010.1016 / j.yfrne.2003.07.001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
11 ။ Ulrich-လိုင် YM, Herman JP ။ endocrine နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများ၏အာရုံကြောစည်းမျဉ်း။ နတ်ဗြာ neuroscience (2009) 10: 397-40910.1038 / nrn2647 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
12 ။ Arriza JL, Simerly RB, Swanson LW, အီဗန် RM ။ glucocorticoid တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖျန်ဖြေအဖြစ်အာရုံခံ mineralocorticoid အဲဒီ receptor ။ အာရုံခံဆဲလျ (1988) 1: 887-90010.1016 / 0896-6273 (88) 90136-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
13 ။ Arriza JL, Weinberger ကို C, Cerelli, G, Glaser TM, Handelin BL, Housman DE, et al ။ အဆိုပါ glucocorticoid အဲဒီ receptor နှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ် kinship: လူ့ mineralocorticoid အဲဒီ receptor complementary DNA ကို၏ကိုယ်ပွား။ သိပ္ပံ (1987) 237: 268-7510.1126 / science.3037703 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
14 ။ Reul JM, က de Kloet ER ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ corticosterone နှစ်ခုအဲဒီ receptor စနစ်များ: microdistribution နှင့် differential ကိုသိမ်းပိုက်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် (1985) 117: 2505-1110.1210 / endo-117-6-2505 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
15 ။ Aronsson M က, Fuxe K ကိုဒေါင် Y ကို, Agnati LF, Okret S က, Gustafsson ဂျေအေ။ situ Hybrid အတွက်အားဖြင့်အထီးကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ glucocorticoid အဲဒီ receptor mRNA ၏ Localization ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (1988) 85: 9331-510.1073 / pnas.85.23.9331 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
16 ။ Gustafsson ဂျာ et al Carlstedt-Duke J ကို, Poellinger L ကို, Okret S က, Wikstrom AC အ, Bronnegard M က။ ဇီဝဓါတုဗေဒ, မော်လီကျူးဇီဝဗေဒ, နှင့် glucocorticoid အဲဒီ receptor ၏ဇီဝြဖစ်စဉ်။ Endocr ဗြာ (1987) 8: 185-23410.1210 / edrv-8-2-185 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
17 ။ Spencer RL, Young က EA ၏, Choo PH သည်, McEwen BS ။ Adrenal Steroid တစ်မျိုး type ကိုငါနှင့်အမျိုးအစား II ကိုအဲဒီ receptor binding in: Vivo အဲဒီ receptor နံပါတ်, ထေိုနှင့် Steroid တစ်မျိုး၏ကွဲပြား Level ဖြင့် activation ၏ခန့်မှန်းချက်။ ဦးနှောက် Res (1990) 514: 37-4810.1016 / 0006-8993 (90) 90433-C ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
18 ။ Groeneweg FL, Karst H ကို, က de Kloet ER, corticosteroids နှင့်အလယ်ပိုင်းစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုမှာသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ Joel အမ် Rapid Non-Genomics ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Endocrinol (2011) 209: 153-6710.1530 / Joe-10-0472 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
19 ။ က de Kloet ER, Karst H ကို, ဗဟိုစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန် Joel အမ် Corticosteroid ဟော်မုန်း: အမြန်-and နှေးကွေးနေ။ တပ်ဦး Neuroendocrinol (2008) 29: 268-7210.1016 / j.yfrne.2007.10.002 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
20 ။ Hinz B က, ကြွက်များတွင် CRF-သွေးဆောင် ACTH Secret အပေါ် glucocorticoids ၏ Hirschelmann R. Rapid Non-Genomics တုံ့ပြန်ချက်ဆိုးကျိုးများ။ Pharm Res (2000) 17: 1273-710.1023 / A: 1007652908104 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
21 ။ Sapolsky RM, ရိုမီယို LM, Munck AU ။ ဘယ်လို glucocorticoids စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသလဲ? အလိုလို, ဖိနှိပ်မှု, stimulatory နှင့်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ရပ်များပေါင်းစပ်။ Endocr ဗြာ (2000) 21: 55-8910.1210 / er.21.1.55 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
22 ။ Grino M က, Burgunder JM, Eskay RL, Eiden LE ။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်း anterior pituitary corticotrophs ၏ glucocorticoid တုန့်ပြန်၏စတင်ခြင်း corticotropin-releasing အချက်အားဖြင့်စီစဉ်ထားသည်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် (1989) 124: 2686-9210.1210 / endo-124-6-2686 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
23 ။ Keller-Wood က ME, Dallman MF ။ ACTH Secret ၏ Corticosteroid တားစီး။ Endocr ဗြာ (1984) 5: 1-2410.1210 / edrv-5-1-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
24 ။ Tasker JG, Di S က, Malcher-Lopes R. Minireview: လျင်မြန်စွာ glucocorticoid အမြှေးပါး-ဆက်စပ် receptors ကနေတဆင့်ပြ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် (2006) 147: 5549-5610.1210 / en.2006-0981 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
25 ။ di S က, Malcher-Lopes R ကို, Halmos KC, Tasker JG ။ အစာရှောင်ရာတုံ့ပြန်ချက်ယန္တရား: အ hypothalamus အတွက် endocannabinoid လွှတ်ပေးရန်မှတဆင့် Nongenomic glucocorticoid တားစီး။ J ကို neuroscience (2003) 23: 4850-7 [PubMed]
26 ။ Evanson NK, Tasker JG, ဟေးလ် MN, Hillard CJ, Herman JP ။ glucocorticoids အားဖြင့် HPA ဝင်ရိုး၏အစာရှောင်ခြင်းတုံ့ပြန်ချက်တားစီး endocannabinoid အချက်ပြကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် (2010) 151: 4811-910.1210 / en.2010-0285 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
27 ။ လှိုဏ် H ကို, Berger က S, Turiault M က, Tronche က F, Schutz, G, Joel အမ် Mineralocorticoid receptors corticosterone အားဖြင့် hippocampal အချိုမှုဂီယာ၏ nongenomic မော်ဂျူများအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ကြသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (2005) 102: 19204-710.1073 / pnas.0507572102 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
28 ။ Qiu S က, et al ရှန်ပိန် DL, ပီတာက M, Catania Eh, Weeber EJ, Levitt P ကို။ limbic system ကို-ဆက်စပ်အမြှေးပါးပရိုတိန်း၏ဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချ hippocampal mineralocorticoid အဲဒီ receptor စကားရပ်, ချို့ယွင်း Synaptic plasticity နှင့် Spatial မှတ်ဉာဏ်လိုငွေပြမှုစေပါတယ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2010) 68: 197-20410.1016 / j.biopsych.2010.02.013 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
29 ။ Barik J ကို, Marti က F, Morel ကို C, ဖာနန်ဒက်ဇ SP, Lanteri ကို C, Godeheu, G, et al ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု dopaminoceptive အာရုံခံအတွက် glucocorticoid အဲဒီ receptor ကနေတဆင့်လူမှုရေးခြင်းကိုမနှစ်သက်အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သိပ္ပံ (2013) 339: 332-510.1126 / science.1226767 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
30 ။ de Kloet ER, Reul JM ။ တုံ့ပြန်ချက်အရေးယူမှုနှင့်ဦးနှောက် function ကိုအပေါ် corticosteroids ၏လုပ်သူများသြဇာလွှမ်းမိုးမှု: ဦးနှောက်ကိုအဲဒီ receptor စနစ်များ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောရာမှပေါ်ထွက်လာသောတစ်ဦးအယူအဆ။ Psychoneuroendocrinology (1987) 12: 83-10510.1016 / 0306-4530 (87) 90040-0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
31 ။ Diorio: D, Viau V ကို, Meaney MJ ။ စိတ်ဖိစီးမှုမှ hypothalamic-pituitary-adrenal တုံ့ပြန်မှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် medial prefrontal cortex (cingulate gyrus) ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို neuroscience (1993) 13: 3839-47 [PubMed]
32 ။ Magarinos လေး, Somoza, G, De Nicola AF ။ ကြွက်များတွင် hippocampectomy ပြီးနောက် Glucocorticoid အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်နှင့် glucocorticoid receptors ။ Horm Metab Res (1987) 19: 105-910.1055 / s ကို-2007-1011753 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
33 ။ McEwen BS, ကြယ်အီးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ။ ရောဂါဦးဆောင် mechanisms ။ Arch International Med (1993) 153: 2093-10110.1001 / archinte.153.18.2093 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
34 ။ Koob gf ။ စွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များကိုတစ်အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံခံဆဲလျ (2008) 59: 11-3410.1016 / j.neuron.2008.06.012 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
35 ။ Holsboer က F, ဗွန် Bardeleben ဦး, Wiedemann K သည်, Muller oa, Stalla GK ။ စိတ်ကျရောဂါအတွက် dexamethasone ပြီးနောက် corticotropin-releasing ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှု serial အကဲဖြတ်။ ပညာ, nonsuppression ၏ pathophysiology များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (1987) 22: 228-3410.1016 / 0006-3223 (87) 90237-X ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
36 ။ Nemeroff သမဝါယမ, Widerlov အီး, Bissette, G, Walleus H ကို, Karlsson ငါ Eklund K သည်, et al ။ စိတ်ဓာတ်လူနာ CSF corticotropin-releasing အချက်ကဲ့သို့ immunoreactivity ၏ elevated ပြင်းအား။ သိပ္ပံ (1984) 226: 1342-410.1126 / science.6334362 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
37 ။ Vyas တစ်ဦးက, Mitra R ကို, Shankaranarayana Rao က BS, Chattarji အက်စ်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု hippocampal နှင့် amygdaloid အာရုံခံအတွက် dendritic အသစ်ပြန်ပြုပြင်၏ပုံစံများခြားနားဖြစ်ပေါ်သည်။ J ကို neuroscience (2002) 22: 6810-8 [PubMed]
38 ။ Lakshminarasimhan H ကို, Chattarji အက်စ်စိတ်ဖိစီးမှုဟာ hippocampus နှင့် amygdala အတွက် neurotrophic အချက်ဆင်းသက်လာဦးနှောက်၏အဆင့်ဆင့်အပေါ်ခြားနားသက်ရောက်မှုစေပါတယ်။ PLoS ONE (2012) 7: e30481.10.1371 / journal.pone.0030481 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
39 ။ Arendt DH, Smith က JP, Bastida CC ကို, Prasad က MS, မှာ Oliver KD, Eyster KM, et al ။ hippocampal နှင့်လူမှုရေးကျူးကျော်ထံမှလွတ်စဉ်အတွင်းအာရုံကြော plasticity နှင့်ဆက်စပ်သောမျိုးဗီဇ၏ amygdalar စကားရပ်နှိုငျးယှဉျ။ Physiol ပြုမူနေ (2012) 107: 670-910.1016 / j.physbeh.2012.03.005 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
40 ။ Kolber BJ, ရောဘတ်က MS, Howell အမတ်, Wozniak DF, တွင် Sands က MS, Muglia LJ ။ ဗဟို amygdala glucocorticoid အဲဒီ receptor အရေးယူကွောကျမကျဆက်နွယ် CRH activation နှင့်အေးစက်အားပေးအားမြှောက်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (2008) 105: 12004-910.1073 / pnas.0803216105 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
41 ။ Schwabe L ကို, Tegenthoff M က, Hoffken အို Wolf ကညီလေး။ တပြိုင်နက်တည်း glucocorticoid နှင့် noradrenergic လှုပ်ရှားမှုလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ဆောင်ချက်၏အာရုံကြောအခြေခံ disrupts ။ J ကို neuroscience (2012) 32: 10146-5510.1523 / JNEUROSCI.1304-12.2012 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
42 ။ Sarabdjitsingh RA, Kofink: D, Karst H ကို, က de Kloet ER, mouse ကို amygdalar Synaptic plasticity ၏ Joel အမ်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုးမြှင့် glucocorticoid နှင့်β-adrenergic လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ PLoS ONE (2012) 7: e42143.10.1371 / journal.pone.0042143 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
43 ။ Gourley SL, Swanson လေး, Koleske AJ ။ Corticosteroid-သွေးဆောင်အာရုံကြောအသစ်ပြန်ပြုပြင်တဲ့အမူအကျင့်အားနည်းချက်နှင့်ခံနိုင်ရည်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ J ကို neuroscience (2013) 33: 3107-1210.1523 / JNEUROSCI.2138-12.2013 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
44 ။ Lehmann ML, Brachman RA, Martinowich K ကို Schloesser RJ, Herkenham အမ် Glucocorticoids အရွယ်ရောက်ပြီးသူ neurogenesis မှတစ်ဆင့်ခံစားချက်အပေါ်မတူကွဲပြားသက်ရောက်မှု orchestrate ။ J ကို neuroscience (2013) 33: 2961-7210.1523 / JNEUROSCI.3878-12.2013 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
45 ။ Meaney MJ, Diorio J ကို, Francis က D:, Widdowson J ကို, LaPlante P ကို, Caldji ကို C, et al ။ forebrain glucocorticoid receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်၏အစောပိုင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း: စိတ်ဖိစီးမှုမှ adrenocortical တုံ့ပြန်မှုများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Dev မှ neuroscience (1996) 18: 49-7210.1159 / 000111395 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
46 ။ Chen က Dy, Bambah-Mukku: D, Pollonini, G, Alberini CM ။ Glucocorticoid receptors မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးဖျန်ဖြေဖို့ CaMKIIalpha-BDNF-CREB လမ်းကြောင်းစုဆောင်း။ နတ် neuroscience (2012) 15: 1707-1410.1038 / nn.3266 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
47 ။ Gourley SL, Swanson လေး, Jacobs လေး, Howell JL, မို M က, Dileone RJ, et al ။ လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှု prefrontal BDNF နှင့် glucocorticoid အဲဒီ receptor binding ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (2012) 109: 20714-910.1073 / pnas.1208342109 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
48 ။ Schwabe L ကို, Oitzl က MS, Philippsen ကို C, ရစ်ချတာက S, Bohringer တစ်ဦးက, Wippich W က, et al ။ စိတ်ဖိစီးမှုလူသားတွေအတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-တုံ့ပြန်မှုသင်ယူမှုမဟာဗျူဟာများနှိုင်းယှဉ် Spatial ၏အသုံးပြုမှုကို modulates ။ 2007-14 / lm.109 [: Mem ကို (1610.1101) 435807 LearnPMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
49 ။ Schwabe L ကို, Schachinger H ကို, က de Kloet ER, Oitzl က MS ။ စိတ်ဖိစီးမှု Spatial သော်လည်းမအစောပိုင်းလှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှုသင်ယူမှုချို့ယွင်း။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res (2010) 213: 50-510.1016 / j.bbr [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
50 ။ Ter Horst JP, ဗန် der မာကုသည် MH, arp M က, Berger က S, က de Kloet ER, Oitzl က MS ။ စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်လုံးဝမစိတ်ဖိစီးမှု: အ forebrain အတွက် mineralocorticoid receptors အပြုအမူလိုက်လျောညီထွေထိန်းညှိ။ Neurobiol Mem ကို (2012) 98 Learn: 33-4010.1016 / j.nlm [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
51 ။ Yuen EY, လျူ W က, Karatsoreos IN, Ren Y ကို, Feng တို့ဂျေ, McEwen BS, et al ။ glutamatergic ဂီယာနှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏စူးရှသောကဖိစီးမှုကုထုံးတွေတိုးမြှင့်မှုအတွက် mechanisms ။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2011) 16: 156-7010.1038 / mp.2010.50 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
52 ။ လိုင် M က, Horsburgh K သည်, ဘေ SE, Carter က RN, Stenvers DJ သမား, မုဆိုး JH, et al ။ Forebrain mineralocorticoid အဲဒီ receptor overexpression, မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေပါတယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ဦးနှောက် ischaemia အတွက်အာရုံခံအရှုံး attenuates ။ EUR J ကို neuroscience (2007) 25: 1832-4210.1111 / j.1460-9568.2007.05427.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
53 ။ ရစ်ချတ်ဆန် HN, Lee က SY, O'Dell LE, Koob gf, Rivier CL ။ အရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေး acute အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးလှုံ့ဆော်ပေမယ့်အရက်မှီခိုနေတဲ့လြော့ neuroendocrine ပြည်နယ်စေပါတယ်။ EUR J ကို neuroscience (2008) 28: 1641-5310.1111 / j.1460-9568.2008.06455.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
54 ။ ဝေမေး, Fentress HM, Hoversten MT, Zhang က L ကို, Hebda-Bauer ek, Watson ဟာ SJ, et al ။ အစောပိုင်းဘဝ forebrain glucocorticoid အဲဒီ receptor overexpression စိုးရိမ်စိတ်အပြုအမူများနှင့်ကင်းာင်းတိုးပွားစေပါသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2012) 71: 224-3110.1016 / j.biopsych.2011.07.009 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
55 ။ de Jong က IE ကို, က de Kloet ER ။ မူးယစ်ဆေးဝါးများ psychostimulant မှ Glucocorticoids နှင့်အားနည်းချက်: အလွှာများနှင့်ယန္တရားဆီသို့။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ (2004) 1018: 192-810.1196 / annals.1296.022 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
56 ။ Marinelli M က, Piazza PV ။ glucocorticoid ဟော်မုန်း, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် psychostimulant မူးယစ်ဆေးများအကြားအပြန်အလှန်။ EUR J ကို neuroscience (2002) 16: 387-9410.1046 / j.1460-9568.2002.02089.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
57 ။ ရောဘတ် AJ, Lessov CN, Phillips ကတီဂျေ။ stress- နှင့်အီသနော-သွေးဆောင် locomotor ာင်းအတွက် glucocorticoid receptors များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ J ကို Pharmacol Exp Ther (1995) 275: 790-7 [PubMed]
58 ။ Rouge-ပိုတငျးက F, Marinelli M က, က Le Moal က M ရှိမုန် H ကို, Piazza PV ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ထိခိုက်စေ glucocorticoids ။ II ကို။ ကိုကင်းများကသွေးဆောင် extracellular dopamine အတွက်တိုး၏အသိမြှစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် corticosterone Secret ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ J ကို neuroscience (1995) 15: 7189-95 [PubMed]
59 ။ Saal: D သည် Dong Y ကို, Bonci တစ်ဦးက, Malenka RC ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါး dopamine အာရုံခံတစ်ဘုံ Synaptic လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပေါ်။ အာရုံခံဆဲလျ (2003) 37: 577-8210.1016 / S0896-6273 (03) 00021-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
60 ။ Tye SJ, Miller ကအေဒီ, Blaha CD တချပ်ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါ midbrain အတွက်မော်လီကျူး equilibrium: အခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian ရစ်သမ်၏အထွတ်အထိပ်နှင့် nadir စဉ်အတွင်း mesoaccumbens dopamine efflux ၏ corticosteroid အဲဒီ receptor စည်းမျဉ်း Differential? synapses (2009) 63: 982-9010.1002 / syn.20682 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
61 ။ Ambroggi က F, Turiault M က, et al Milet တစ်ဦးက, Deroche-Gamonet V ကို, Parnaudeau S က, Balado အီး။ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စွဲ: dopaminoceptive အာရုံခံအတွက် glucocorticoid အဲဒီ receptor ကိုကင်းရှာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ နတ် neuroscience (2009) 12: 247-910.1038 / nn.2282 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
62 ။ S က, Shelton ဟာ KL, မိုင် MF လျောက်ပတ် Costin BN, Wolen AR ။ prefrontal cortex ဗီဇစကားရပ်နှင့်အီသနောမှစူးရှသောအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက် adrenal glucocorticoid အချက်ပြ၏အခန်းက္ပ။ အရက် Clin Exp Res (2013) 37: 57-6610.1111 / j.1530-0277.2012.01841.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
63 ။ Cippitelli တစ်ဦးက, et al Damadzic R ကို, Hamelink ကို C, Brunnquell M က, Thorsell တစ်ဦးက, Heilig M က။ mifepristone နှင့်အတူအမျိုးအစား II ကို glucocorticoid receptors ၏ထေိုအာရုံကြောဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း Bing ကဲ့သို့အီသနောစားသုံးမှု corticosterone အဆင့်ဆင့်နှင့် neurodegneration တိုးပွားစေပါသည်။ စှဲလမျးသူ Biol (2012) ။ 10.1111 / j.1369-1600.2012.00451.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
64 ။ Prendergast MA, Mulholland PJ ။ အီသနော-ဆက်နွယ်မှီခိုမှုနှင့်အာရုံခံဒဏ်ရာအထောက်အကူပြုကြောင်း glutamatergic synapses ၏ plasticity အတွက် Glucocorticoid နှင့် polyamine interaction က။ စှဲလမျးသူ Biol (2012) 17: 209-2310.1111 / j.1369-1600.2011.00375.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
65 ။ Little က HJ, Croft က AP, O'Callaghan MJ, Brooks SP, ဝမ်, G, Shaw ကစင်ကာပူဒေါ်လာ။ ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက် glucocorticoid အတွက်ရွေးချယ်တိုး: နာတာရှည်အရက်တစ်ဝတ္ထုအကျိုးသက်ရောက်မှု။ neuroscience (2008) 156: 1017-2710.1016 / j.neuroscience.2008.08.029 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
66 ။ Vendruscolo LF, Barbier အီး, Schlosburg je, Misra KK, Whitfield TW, Jr. Logrip ML, et al ။ Corticosteroid-မှီခို plasticity ကြွက်များတွင်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအရက်သေစာသောက်သုံး mediates ။ J ကို neuroscience (2012) 32: 7563-7110.1523 / JNEUROSCI.0069-12.2012 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
67 ။ နှင်းဆီ AK, Shaw ကစင်ကာပူဒေါ်လာ, Prendergast MA, Little က HJ ။ အရက်မှီခိုနှင့် neurotoxicity အတွက် glucocorticoids ၏အရေးပါမှုကို။ အရက် Clin Exp Res (2010) 34: 2011-810.1111 / j.1530-0277.2010.01298.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
68 ။ ယဉ်နာရီ, Mulcare SP, Hilario MR, Clouse အီး, Holloway T က, Davis က MI, et al ။ တစ်ဦးကျွမ်းကျင်မှုများဝယ်ယူခြင်းနှင့်စုစည်းစဉ်အတွင်း striatal ဆားကစ်၏ dynamic ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း။ နတ် neuroscience (2009) 12: 333-4110.1038 / nn.2261 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
69 ။ et al Lecea L ကို, Kilduff TS, Peyron ကို C, Gao X ကို, Foye PE, Danielson PE, က de ။ အဆိုပါ hypocretins: neuroexcitatory လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ hypothalamus-တိကျတဲ့ peptides ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (1998) 95: 322-710.1073 / pnas.95.1.322 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
70 ။ Sakurai T က, Amemiya တစ်ဦးက, Ishii M က, Matsuzaki ငါ Chemelli RM, Tanaka H ကို, et al ။ Orexins နှင့် orexin receptors: hypothalamic neuropeptides နှင့်အပြုအမူအစာကျွေးထိန်းညှိကြောင်း, G ပရိုတိန်း-coupled receptors တစ်မိသားစု။ cell (1998) 92: 573-8510.1016 / S0092-8674 (02) 09256-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
71 ။ Anaclet ကို C, Parmentier R ကို, Ouk K ကို Guidon, G, Buda ကို C, Sastre JP, et al ။ Orexin / hypocretin နှင့် histamine: နိုးနိုးကွားကွား၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍခေါက်ထွက် mouse ကိုမော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. သရုပ်ပြခဲ့သည်။ J ကို neuroscience (2009) 29: 14423-3810.1523 / JNEUROSCI.2604-09.2009 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
72 ။ Chemelli RM, ဝီလီ JT, Sinton CM, Elmquist JK, Scammell T ကလီကို C, et al ။ orexin နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာ Narcolepsy: အိပ်စက်ခြင်းစည်းမျဉ်း၏မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ။ cell (1999) 98: 437-5110.1016 / S0092-8674 (00) 81973-X ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
73 ။ ဟေး AC အဂျက်ဆင်ခ, ချပ်မန်း H ကို, Tadayyon M က, Johns တစ်ဦးက, Porter RA, et al ။ တစ်ဦးကရွေးချယ် orexin-1 အဲဒီ receptor ရန်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်အစားအစာစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ စည်းမျဉ်း Pept (2000) 96: 45-5110.1016 / S0167-0115 (00) 00199-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
74 ။ Yamada H ကို, Okumura T က, Motomura W က, Kobayashi Y ကို, အစားအစာစားသုံးမှု၏ Kohgo Y. တားစီးအစာရှောင်ကြွက်များတွင် Anti-orexin antibody ကို၏ဗဟိုဆေးထိုးသည်။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Biophys Res Community (2000) 267: 527-3110.1006 / bbrc.1999.1998 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
75. Elias CF, Saper CB, Maratos-Flier E, Tritos NA, Lee C, Kelly J ။ အဆိုပါ mediobasal hypothalamus နှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် hypothalamic areaရိယာချိတ်ဆက်ဓာတုဗေဒသတ်မှတ်ထားသောစီမံကိန်း။ J ကို Comp Neurol (1998) 402: 442-5910.1002 / (SICI) 1096-9861 (19981228) 402:4<442 :: AID-CNE2> 3.3.CO; 2- ငါ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
76 ။ Peyron ကို C, Tighe DK, ဗန်တွင်း Pol AN, et al က de Lecea L ကို, Heller HC, Sutcliffe JG ။ မျိုးစုံအာရုံခံစနစ်များမှ hypocretin (orexin) စီမံကိန်းကို်အာရုံခံ။ J ကို neuroscience (1998) 18: 9996-10015 [PubMed]
77 ။ Harris က GC, Aston-ဂျုံးစ် G. အ arousal နှင့်ဆုလာဘ်: orexin function ကိုတစ်ဦး dichotomy ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience (2006) 29: 571-710.1016 / j.tins.2006.08.002 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
78 ။ Ida T က, Nakahara K ကို Murakami T က, Hanada R ကို, Nakazato M က, ကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက် orexin ၏ Murakami N. ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Biophys Res Community (2000) 270: 318-2310.1006 / bbrc.2000.2412 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
79 ။ Kagerer သည် SM, adrenocortical လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူ orexins / hypocretins ၏ Johren O. ဆက်သွယ်မှုသည်။ Acta Physiol (Oxf) (2010) 198: 361-7110.1111 / j.1748-1716.2009.02034.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
80 ။ al-Barazanji Ka, Wilson က S နဲ့, Baker J ကို, Jessop DS, Harbuz က MS ။ ဗဟို orexin-တစ်ဦးက hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်သတိကြွက်များတွင်အာရုံခံ vasopressin အချက်နှင့်မိုင်နိုအက်စစ်ထွက်ရှိ hypothalamic corticotropin လှုံ့ဆော်။ J ကို Neuroendocrinol (2001) 13: 421-410.1046 / j.1365-2826.2001.00655.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
81 ။ Jaszberenyi M က, Bujdoso အီး, Pataki ငါ hypothalamic-pituitary-adrenal system ပေါ်တွင် orexins ၏ Telegdy G. အအကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို Neuroendocrinol (2000) 12: 1174-810.1046 / j.1365-2826.2000.00572.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
82 ။ Kuru M က, Ueta Y ကို, Serino R ကို, Nakazato M က, Yamamoto Y ကို, ရှိဘုယ, ငါသည် et al ။ ဗဟိုအုပ်ချုပ် orexin / hypocretin ကြွက်များတွင် HPA ဝင်ရိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်။ Neuroreport (2000) 11: 1977-8010.1097 / 00001756-200006260-00034 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
83 ။ Kuwaki T က, Zhang ကဒဗလျူ Orexin အာရုံခံခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု။ Vitam Horm (2012) 89: 135-5810.1016 / B978-0-12-394623-2.00008-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
84 ။ di Chiara, G, Imperato အေအီသနောဦးစားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်။ EUR J ကို Pharmacol (1985) 115: 131-210.1016 / 0014-2999 (85) 90598-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
85 ။ Koob gf, Bloom FE ။ မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ သိပ္ပံ (1988) 242: 715-2310.1126 / science.2903550 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
86 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Rompre PP ။ ဦးနှောက် dopamine နဲ့ဆုလာဘ်။ Annu ဗြာ Psychol (1989) 40: 191-22510.1146 / annurev.ps.40.020189.001203 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
87 ။ Borgland SL, Taha လုပ် SA, Sarti က F, Fields HL, အ VTA အတွက် Bonci အေ Orexin တစ်ဦးကင်းမှ Synaptic plasticity နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကဲဆတ်ခြင်း induction ဘို့အရေးကြီးသည်။ အာရုံခံဆဲလျ (2006) 49: 589-60110.1016 / j.neuron.2006.01.016 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
88 ။ DiLeone RJ, Georgescu: D, Nestler EJ ။ ဆုလာဘ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းအတွက် lateral hypothalamic neuropeptides ။ ဘဝကသိပ္ပံ (2003) 73: 759-6810.1016 / S0024-3205 (03) 00408-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
89 ။ Harris က GC, Wimmer M က, ဆုလာဘ်ရှာအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic orexin အာရုံခံအဘို့အ Aston-Jones ဟာဂျီတစ်ဦးရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝတရား (2005) 437: 556-910.1038 / nature04071 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
90 ။ Paneda ကို C, Winsky-Sommerer R ကို, Boutrel B က, က de Lecea အယ်လ်အဆိုပါ corticotropin-releasing အချက်-hypocretin ကွန်နက်ရှင်: စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်စွဲလမ်းအတွက်ဂယက်ရိုက်။ မူးယစ်ဆေးသတင်းရှုထောင့် (2005) 18: 250-510.1358 / dnp.2005.18.4.908659 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
91 ။ Pasumarthi RK, Reznikov LR စူးရှသောနီကိုတင်းနေဖြင့်အာရုံခံ orexin ၏ Fadel ဂျေ Activation ။ EUR J ကို Pharmacol (2006) 535: 172-610.1016 / j.ejphar.2006.02.021 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
92 ။ Dayas CV ကို, McGranahan TM, မာတင်-Fardon R ကို, Weiss အက်ဖ်လှုံ့ဆော်မှုအီသနောရရှိနိုင်မှုနှင့်ဆက်စပ် relapse တစ် reinstatement မော်ဒယ်အတွက် hypothalamic လှည်းနှင့် orexin အာရုံခံသက်ဝင်စေပါ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2008) 63: 152-710.1016 / j.biopsych.2007.02.002 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
93 ။ Jupp B, Krivdic B, Krstew အီးလောရင့် AJ ။ အဆိုပါ orexin အဲဒီ receptor ရန် SB-334867 ကြွက်များတွင်အရက်နှင့်အ sucrose များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများ dissociates ။ ဦးနှောက် Res (2011) 1391: 54-910.1016 / j.brainres.2011.03.045 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
94 ။ လောရင့် AJ, Cowen က MS, ယန် HJ, ချန်က F, Oldfield ခအဆိုပါ orexin system ကိုကြွက်များတွင်အရက်-ရှာကြံထိန်းညှိ။ br J ကို Pharmacol (2006) 148: 752-910.1038 / sj.bjp.0706789 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
95 ။ Moorman DE, Aston-ဂျုံးစ် G. အ Orexin-1 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း High-အီသနောအတွက်ရွေးချယ်အီသနောစားသုံးမှုနှင့် preference ကိုလျော့နည်းစေ - Dawley ကြွက်များ - Sprague ပိုလိုလားကြသည်။ အရက် (2009) 43: 379-8610.1016 / j.alcohol.2009.07.002 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
96 ။ Richards JK, Pins အရေအတွက်အနေနဲ့လည်းဂျာ Steensland P ကို, Taha လုပ် SA, Borgland SL, Bonci တစ်ဦးက, et al ။ orexin-1 / hypocretin-1 receptors ၏တားစီးအီသနောနဲ့ Long-အီဗန်ကြွက်များတွင်ရှာကြံ sucrose ၏ yohimbine-သွေးဆောင် reinstatement ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Psychopharmacology (Berl) (2008) 199: 109-1710.1007 / s00213-008-1136-5 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
97 ။ Srinivasan S က, Pins အရေအတွက်အနေနဲ့လည်းဂျာ et al Nielsen CK, Lieske SP, Bito-Onon JJ, ရီ H ကို။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာ dual-orexin / hypocretin အဲဒီ receptor ရန်, almorexant, အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuates ။ PLoS ONE (2012) 7: e44726.10.1371 / journal.pone.0044726 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
98 ။ Kim က AK, Brown က RM, လောရင့် AJ ။ အရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုများတွင် orexins / hypocretins ၏အခန်းကဏ္ဍကို: တစ်ဦးအစာစားချင်စိတ်-ဆုလာဘ်ကြားဆက်ဆံရေး။ တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience (2012) 6: 78.10.3389 / fnbeh.2012.00078 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
99 ။ Shoblock JR, Welty N ကို, Aluisio L ကို, Fraser ငါ Motley ST, Morton K သည်, et al ။ အဆိုပါ orexin-2 အဲဒီ receptor ၏ရွေးချယ်ပိတ်ဆို့အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး, နေရာ preference ကိုနှင့် reinstatement attenuates ။ Psychopharmacology (Berl) (2011) 215: 191-20310.1007 / s00213-010-2127-x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
100 ။ Boutrel B, Kenny PJ, Specio SE, မာတင်-Fardon et al R ကို, Markou တစ်ဦးက, Koob gf ။ ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ဖြန်ဖြေအတွက် hypocretin များအတွက်အခန်းက္ပ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (2005) 102: 19168-7310.1073 / pnas.0507480102 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
101 ။ ဝမ် B က, သင် ZB, ပညာရှိ RA ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ hypocretin (orexin) ကရှာကြံကင်း၏ Reinstatement: ဒေသခံ corticotropin-releasing အချက်ကွန်ယက်မှလွတ်လပ်ရေး။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2009) 65: 857-6210.1016 / j.biopsych.2009.01.018 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
102 ။ Jupp B, Krstew အီး, Dezsi, G, လောရင့် AJ ။ discrete cue-အေးစက်အရက်-ရှာကြံပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence: orexin ၏အာရုံကြော activation နှင့်ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ပုံစံ (1) receptors ။ br J ကို Pharmacol (2011) 162: 880-910.1111 / j.1476-5381.2010.01088.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
103 ။ Moller ကို C, Wiklund L ကို, Sommer W က, Thorsell တစ်ဦးက, Heilig အမ်အလယ်ပိုင်းပေမယ် basolateral မဟုတ် amygdala ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါကြွက်များတွင်စမ်းသပ်စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုလျော့နည်းသွားသည်။ ဦးနှောက် Res (1997) 760: 94-10110.1016 / S0006-8993 (97) 00308-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
104 ။ McFarland K ကို Davidge SB, Lapish CC ကို, Kalivas PW ။ Limbic နှင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ footshock-သွေးဆောင် reinstatement အခြေခံမော်တာ circuitry ။ J ကို neuroscience (2004) 24: 1551-6010.1523 / JNEUROSCI.4177-03.2004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
105 ။ Schmidt က FM ရေ, Arendt အီး, Steinmetzer တစ်ဦးက, Bruegel က M, Kratzsch J ကို, Strauss M က, et al ။ CSF-hypocretin-1 ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်အဆင့်ဆင့်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res (2011) 190: 240-310.1016 / j.psychres.2011.06.004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
106 ။ Schmitt အို Usunoff ကီလိုဂရမ်, Lazarov NE, Itzev DE, Eipert P ကို, Rolf တစ်ဦးက, et al ။ ကြွက်များတွင်တိုးချဲ့ amygdala နှင့် Basal ganglia ၏ Orexinergic innervation ။ ဦးနှောက် Struct Funct (2012) 217: 233-5610.1007 / s00429-011-0343-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
107 ။ Lungwitz EA ၏, Molosh တစ်ဦးက, ဂျွန်ဆင် PL, Harvey, BP, Dirk RC, Dietrich တစ်ဦးက, et al ။ Orexin-တစ်ဦးကကြွက်၏ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် glutamatergic receptors နှင့်အတူ interaction ကမှတဆင့်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူဖြစ်ပေါ်သည်။ Physiol ပြုမူနေ (2012) 107: 726-3210.1016 / j.physbeh.2012.05.019 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
108 ။ Conrad KL, Davis က AR, Silberman Y ကို, Sheffler DJ သမား, Shields အေဒီ, Saleh လုပ် SA, et al ။ Yohimbine BNST အတွက် excitatory ဂီယာ depresses နှင့် orexin-မှီခို, norepinephrine-လွတ်လပ်သောဖြစ်စဉ်များမှတစ်ဆင့်ကင်းရာအရပ်ကို preference ကို၏မျိုးသုဉ်းချို့ယွင်း။ Neuropsychopharmacology (2012) 37: 2253-6610.1038 / npp.2012.76 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
109 ။ Winrow CJ, Gotter AL, ကော့ CD ကို, Doran သည် SM, Tannenbaum PL, Breslin MJ, et al ။ suvorexant-တစ်ဝတ္ထုကို dual orexin အဲဒီ receptor ရန်ခြင်းဖြင့်အိပ်ပျော်ရာမြှင့်တင်ရေး။ J ကို Neurogenet (2011) 25: 52-6110.3109 / 01677063.2011.566953 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
110 ။ Garrido P ကို, et al De Blas M က, Ronzoni, G, Cordero ငါ Anton M က, Gine အီး။ အလုပ်လုပ်မှကြားဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ခံစားမှုအမှတ်တရများ: အအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များ၏ prefrontal cortex အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဖို့ဟော်မုန်းနှင့် neurochemical တုံ့ပြန်မှုအပေါ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ခြင်းနှင့်အထီးကျန်အိမ်ယာ၏ differential ဆိုးကျိုးများ။ J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm (2013) 120: 829-4310.1007 / s00702-012-0935-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
111 ။ Herman JP, Ostrander MM, Mueller NK, စိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်း၏ Figueiredo အိပ်ချ် Limbic system ကိုယန္တရားများ: hypothalamo-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုး။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2005) 29: 1201-1310.1016 / j.pnpbp.2005.08.006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
112 ။ Sullivan က RM, ထိုကြွက်နှင့် psychopathology များအတွက်သက်ရောက်မှုတွေအတွက် hypothalamic-pituitary-adrenal function ကို၏ Gratton အေ Prefrontal cortical စည်းမျဉ်း: ခြမ်းကိစ္စရပ်များ။ Psychoneuroendocrinology (2002) 27: 99-11410.1016 / S0306-4530 (01) 00038-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
113 ။ Weinberg က MS, ဂျွန်ဆင်, DC, Bhatt က AP, Spencer RL ။ Medial prefrontal cortex လှုပ်ရှားမှုစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုလေ့၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်သည်။ neuroscience (2010) 168: 744-5610.1016 / j.neuroscience.2010.04.006 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
114 ။ ရွှေ PE ။ သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အာရုံကြောစနစ်များ Acetylcholine မော်ဂျူ။ 2003-80 / j.nlm.194 [: Neurobiol Mem ကို (21010.1016) 2003.07.003 LearnPubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
115 ။ Levin HS, Rodnitzky RL ။ လူကို organophosphate ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ Clin Toxicol (1976) 9: 391-40310.3109 / 15563657608988138 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
116 ။ ကင်မ် JJ, စိန် DM ။ အဆိုပါအလေးပေး hippocampus, Synaptic plasticity နှင့်ဆုံးရှုံးသွားသောအမှတ်တရများ။ နတ်ဗြာ neuroscience (2002) 3: 453-62 [PubMed]
117 ။ McEwen BS ။ ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုများအတွက်ဆိုးရွားသောအတွေ့အကြုံများ၏ဆိုးကျိုးများ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2000) 48: 721-3110.1016 / S0006-3223 (00) 00964-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
118 ။ McEwen BS, Weiss JM, Schwartz LS ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ limbic အဆောက်အဦများအားဖြင့် corticosterone ၏ရွေးချယ် retention ကို။ သဘာဝတရား (1968) 220: 911-210.1038 / 220911a0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
119 ။ del Arco တစ်ဦးက, Mora အက်ဖ် Neurotransmitters နှင့် prefrontal Cortex-limbic စနစ်က interaction က: plasticity များအတွက်သက်ရောက်မှုနှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်။ J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm (2009) 116: 941-5210.1007 / s00702-009-0243-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
120. Vizi ES, Kiss JP ။ အာရုံကြောဓာတုဗေဒနှင့်အဓိက hippocampal ထုတ်လွှင့်စနစ်များ၏ဆေးဝါးဗေဒ: Synaptic နှင့် nonsynaptic interaction က။ Hippocampus (1998) 8: 566-60710.1002 / (SICI) 1098-1063 (1998) 8:6<566 :: AID-HIPO2> 3.0.CO; 2-W [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
121 ။ Imperato တစ်ဦးက, Puglisi-Allegra S က, Casolini P ကို, Angelucci အယ်လ်ဦးနှောက် dopamine နဲ့ acetylcholine လွှတ်ပေးရန်အတွက်အပြောင်းအလဲများစဉ်နှင့်အောက်ပါစိတ်ဖိစီးမှုဟာ pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုး၏လွတ်လပ်သောဖြစ်ကြသည်။ ဦးနှောက် Res (1991) 538: 111-710.1016 / 0006-8993 (91) 90384-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
122 ။ Ross က SA, Wong က JY, Clifford JJ, Kinsella တစ်ဦးက, Massalas JS, horn MK, et al ။ တစ်ဦး alpha4အာရုံခံနီကိုတင်း acetylcholine အဲဒီ receptor subunit ၏ Phenotypic စရိုက်လက္ခဏာတွေခေါက်ထွက် mouse ကို။ J ကို neuroscience (2000) 20: 6431-41 [PubMed]
123 ။ Booker TK, Butt CM, Wehner JM, Heinemann SF, Collins က AC အ။ beta3 နီကိုတင်းအဲဒီ receptor subunit နောက်ကောက်ကြွက်တွေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ကဲ့သို့သောအပြုအမူလျော့နည်းသွားသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (2007) 87: 146-5710.1016 / j.pbb.2007.04.011 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
124 ။ sala R ကို, Pieri က F, Fung B, Daniely ဂျာ De Biasi အမ်ဟာနီကိုတင်းအဲဒီ receptor ၏ beta4 subunit ချို့တဲ့ Mutant ကြွက်တွေမှာအပြောင်းအလဲတချို့စိုးရိမ်ပူပန်-related တုံ့ပြန်မှု။ J ကို neuroscience (2003) 23: 6255-63 [PubMed]
125 ။ sala R ကို, Orr-Urtreger တစ်ဦးက, Broide RS, Beaudet တစ်ဦးက, Paylor R ကို, De Biasi အမ်5Vivo အတွက်နီကိုတင်း၏ရေတိုရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ mediates အဆိုပါနီကိုတင်း acetylcholine အဲဒီ receptor subunit alpha ။ Mol Pharmacol (2003) 63: 1059-6610.1124 / mol.63.5.1059 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
126 ။ sala R ကို, Pieri က F, De Biasi အမ်ဟာ beta4 နီကိုတင်း acetylcholine အဲဒီ receptor subunit များအတွက်တရားမဝင်သောကြွက်တွေမှာနီကိုတင်းဆုတ်ခွာလက္ခဏာလျော့နည်းသွားသည်။ J ကို neuroscience (2004) 24: 10035-910.1523 / JNEUROSCI.1939-04.2004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
127 ။ Brioni JD, အိုနေးလ် AB ကင်မ် DJ သမား, နှစ်ထပ်မဂ္ဂါဝပ်။ နီကိုတင်းအဲဒီ receptor agonists ဓါတ်လှေကားပေါင်း-ဝင်္စမ်းသပ်မှုအပေါ် anxiolytic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများပြ။ EUR J ကို Pharmacol (1993) 238: 1-810.1016 / 0014-2999 (93) 90498-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
128 ။ Cao W က, Burkholder T က, Wilkins L ကို, Collins က AC အ။ အဆိုပါတန်ပြန်မြင်အခန်းအီသနောနှင့်နီကိုတင်း၏အမူအကျင့်လုပ်ရပ်များ၏မျိုးဗီဇနှိုင်းယှဉ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (1993) 45: 803-910.1016 / 0091-3057 (93) 90124-C ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
129 ။ Costall B, ကယ်လီ ME, Naylor RJ, Onaivi ES ။ စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ mouse ကိုမော်ဒယ်အတွက်နီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်းများ၏လုပ်ရပ်များ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (1989) 33: 197-20310.1016 / 0091-3057 (89) 90450-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
130 ။ SE, Cheeta S က, Kenny PJ File ။ နီကိုတင်းစိုးရိမ်စိတ်အမျိုးမျိုး mediates သော Neurobiological ယန္တရားများ။ EUR J ကို Pharmacol (2000) 393: 231-610.1016 / S0014-2999 (99) 00889-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
131 ။ Alzoubi KH, Srivareerat M က, Tran TT, Alkadhi Ka ။ hippocampus-မှီခိုမှတ်ဉာဏ်၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ချို့ယွင်းအတွက်နီကိုတင်း၏အာရုံကြောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် alpha7- နှင့် alpha4beta2-nAChRs ၏အခန်းက္ပ။ int J ကို Neuropsychopharmacol (2013) 16: 1105-1310.1017 / S1461145712001046 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
132 ။ Akana SF, Chu တစ်ဦးက, Soriano L ကို, Dallman MF ။ Corticosterone adrenocorticotropic ဟော်မုန်း, အင်ဆူလင်နှင့်အဆီဝင်းများအဖြစ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအပေါ် prefrontal cortex နဲ့ amygdala အတွက် site ကို-တိကျတဲ့နှင့်ပြည်နယ်မှီခိုသက်ရောက်မှုပြုပြင်။ J ကို Neuroendocrinol (2001) 13: 625-3710.1046 / j.1365-2826.2001.00676.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
133 ။ Feldman က S, Conforti N ကို, Saphier ဃပု stria terminalis ၏ preoptic ဧရိယာနှင့်အိပ်ရာနျူကလိယ adrenocortical လျှို့ဝှက်ချက်ပေါ် amygdala ၏သက်ရောက်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ neuroscience (1990) 37: 775-910.1016 / 0306-4522 (90) 90107-F [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
134 ။ Herman JP, Schafer MK, Young က EA ၏, Thompson က R ကို, Douglass J ကို, Akil H ကို, et al ။ အဆိုပါ hypothalamo-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုး၏ neuroendocrine အာရုံခံ၏ hippocampal စည်းမျဉ်းများအတွက်အထောက်အထား။ J ကို neuroscience (1989) 9: 3072-82 [PubMed]
135 ။ Jacobson L ကို, Sapolsky R. အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုး၏တုံ့ပြန်ချက်စည်းမျဉ်းထဲမှာ hippocampus ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Endocr ဗြာ (1991) 12: 118-3410.1210 / edrv-12-2-118 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
136 ။ Sapolsky RM, Krey LC, McEwen BS ။ Glucocorticoid-အထိခိုက်မခံ hippocampal အာရုံခံအဆိုပါ adrenocortical စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုရပ်စဲအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (1984) 81: 6174-710.1073 / pnas.81.19.6174 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
137 ။ Matta စင်ကာပူဒေါ်လာ, Beyer HS, McAllen KM, Sharp က BM ။ နီကိုတင်းနေတဲ့ဗဟိုယန္တရားအားဖြင့်ကြွက် plasma ACTH elevates ။ J ကို Pharmacol Exp Ther (1987) 243: 217-26 [PubMed]
138 ။ Matta စင်ကာပူဒေါ်လာ, McAllen KM, Sharp က BM ။ သွေးကြောသွင်းနီကိုတင်းဖို့ကြွက် plasma ACTH တုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေအတွက်စတုတ္ထ cerebroventricle ၏အခန်းက္ပ။ J ကို Pharmacol Exp Ther (1990) 252: 623-30 [PubMed]
139 ။ Sawchenko PE, Bohn MC ။ အဆိုပါ hypothalamus ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကြွက်များတွင်ကျောရိုးမှပရောဂျက်တစ်ခုကို C1, C2 နှင့် C3 adrenergic အာရုံခံအတွက် Glucocorticoid အဲဒီ receptor-immunoreactivity ။ J ကို comp Neurol (1989) 285: 107-1610.1002 / cne.902850109 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
140 ။ Swanson LW, Sawchenko PE, Rivier J ကို, ခြိုငျ့ WW ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ ovine corticotropin-releasing အချက် immunoreactive ဆဲလ်များနှင့်အမျှင်အဖွဲ့: တစ်ခု immunohistochemical လေ့လာမှု။ Neuroendocrinology (1983) 36: 165-8610.1159 / 000123454 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
141 ။ ဖူ Y ကို, Matta စင်ကာပူဒေါ်လာ, ချစ်သူများနေ့ JD, Sharp က BM ။ ကြွက် paraventricular နျူကလိယအတွက် Adrenocorticotropin တုံ့ပြန်မှုများနှင့်နီကိုတင်း-သွေးဆောင် norepinephrine Secret brainstem receptors မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် (1997) 138: 1935-4310.1210 / en.138.5.1935 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
142 ။ Zhao နှင့် R ကို, ချန် H ကို, Sharp က BM ။ hypothalamic paraventricular နျူကလိယနှင့် amygdala အတွက်နီကိုတင်း-သွေးဆောင် norepinephrine လွှတ်ပေးရေးနျူကလိယ Tractus solitarius အတွက် N-methyl-D-aspartate receptors နှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ J ကို Pharmacol Exp Ther (2007) 320: 837-4410.1124 / jpet.106.112474 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
143 ။ Sawchenko PE, Swanson LW ။ အဆိုပါ brainstem ကနေကြွက်များတွင် paraventricular နှင့် supraoptic အရေးပါဖို့ noradrenergic လမ်းကြောင်း၏အဖှဲ့အစညျး။ ဦးနှောက် Res (1982) 257: 275-325 [PubMed]
144 ။ Swanson LW, Sawchenko PE, Berod တစ်ဦးက, Hartman ကယ်, ငရဲ KB, Vanorden DE ။ catecholaminergic ဆဲလ်များနှင့် paraventricular အတွက် terminal ကိုလယ်ကွင်းများနှင့် hypothalamus ၏ supraoptic အရေးပါ၏အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု immunohistochemical လေ့လာမှု။ J ကို comp Neurol (1981) 196: 271-8510.1002 / cne.901960207 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
145 ။ Kalappa BI, Feng တို့က L, Kem WR, Gusev AG က, Uteshev VV ။ ဆိတ်ညံသောကျေးရွာအုပ်စုများ၏နျူကလိယထဲမှာနီကိုတင်း agonists အားဖြင့် Synaptic အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်၏ပံ့ပိုးကူညီ၏ mechanisms ။ နံနက် J ကို Physiol ဆဲလ် Physiol (2011) 301: C347-6110.1152 / ajpcell.00473.2010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
146 ။ Smith က DV, Uteshev VV ။ ဆိတ်ညံသောကျေးရွာအုပ်စုများ caudal နျူကလိယထဲမှာနီကိုတင်း acetylcholine အဲဒီ receptor ထုတ်ဖော်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော။ Neuropharmacology (2008) 54: 445-5310.1016 / j.neuropharm.2007.10.018 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
147 ။ နွားကို AE, Clark က AL, Grady SR, et al ရော်ဘင်ဆင် SF, Slobe BS, Marks MJ ။ Neurosteroids mouse ကို striatal နှင့် thalamic synaptosomes အတွက်နီကိုတင်းအဲဒီ receptor function ကို modulate ။ J ကို Neurochem (1997) 68: 2412-2310.1046 / j.1471-4159.1997.68062412.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
148 ။ ke L ကို, လောနိတျမွို့ RJ ။ မတူကွဲပြားသောနီကိုတင်း acetylcholine အဲဒီ receptor Subtype ၏ ligand binding နှင့် functional လှုပ်ရှားမှုများအပေါ် Steroid တစ်မျိုးထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ J ကို Neurochem (1996) 67: 1100-1210.1046 / j.1471-4159.1996.67031100.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
149 ။ ရှီ LJ, သူ hy, လျူ LA က, ဝမ် CA. PC12 ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့အာရုံကြောဆဲလ်နီကိုတင်း acetylcholine အဲဒီ receptor အပေါ် corticosterone ၏လျင်မြန်သော nongenomic အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Arch ထဲကဓာတုပစ်စညျး Biophys (2001) 394: 145-5010.1006 / abbi.2001.2519 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
150 ။ Takita M က, ကြွက်များတွင်ရွေ့စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်နီကိုတင်းအားဖြင့်သွေးဆောင်ဦးနှောက်နီကိုတင်း receptors ၏ Muramatsu ဗြဲပြင်ဆင်ခြင်း။ ဦးနှောက် Res (1995) 681: 190-210.1016 / 0006-8993 (95) 00265-R ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
151 ။ Almeida LE, Pereira EF, Alkondon M က, Fawcett WP, Randall WR, သည် Albuquerque EX ။ အဆိုပါ opioid ရန် naltrexone လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နှင့် hippocampal အာရုံခံအတွက် alpha7 နှင့် alpha4beta2 နီကိုတင်း receptors ၏စကားရပ်ပွောငျးလဲ: ဆေးလိပ်သောက်ရပ်နားခြင်းအစီအစဉ်များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Neuropharmacology (2000) 39: 2740-5510.1016 / S0028-3908 (00) 00157-X ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
152 ။ Leonard က S, Gault J ကို, Hopkins J ကို, Logel J ကို, et al Vianzon R ကို, က Short M က။ ကမကထ၏အစည်းအရုံး schizophrenia မှာတွေ့ရှိထားတဲ့ inhibitory လိုငွေပြမှုနှင့်အတူ alpha7 နီကိုတင်း acetylcholine အဲဒီ receptor subunit မျိုးရိုးဗီဇအတွက် variants ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2002) 59: 1085-9610.1001 / archpsyc.59.12.1085 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
153 ။ Berse B, Blusztajn JK ။ glucocorticoids အားဖြင့် cholinergic locus စကားရပ်နှင့် retinoic အက်ဆစ်၏ Modulation တိကျတဲ့ဆဲလ်-type အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ FEBS လက်တ (1997) 410: 175-910.1016 / S0014-5793 (97) 00568-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
154 ။ Battaglia M က, Ogliari အေပူပန်ခြင်းနှင့်ထိတ်လန့်: လူ့လေ့လာမှုများကနေတိရိစ္ဆာန်သုတေသနနှင့်နောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်။ neuroscience Biobehav ဗြာ (2005) 29: 169-7910.1016 / j.neubiorev.2004.06.013 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
155 ။ Meshorer အီး, Soreq အိပ်ချ်သီလနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related neuropathologies အတွက်နာအစားထိုး splicing ၏ဒုက္ခ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience (2006) 29: 216-2410.1016 / j.tins.2006.02.005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
156 ။ Meerson တစ်ဦးက, Cacheaux L ကို, Goosens Ka, Sapolsky RM, Soreq H ကို, ဦးနှောက် MicroRNAs အတွက် Kaufer ဃအပြောင်းအလဲများ cholinergic စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုမှကူညီသည်။ J ကို Mol neuroscience (2010) 40: 47-5510.1007 / s12031-009-9252-1 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
157 ။ Shaltiel, G, ဟာနန်က M, Wolf က Y ကို, Barbash S က, Kovalev အီး, ဟံက S, et al ။ Hippocampal microRNA-132 ယင်း၏ acetylcholinesterase ပစ်မှတ်မှတဆင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်သိမြင်လိုငွေပြမှု mediates ။ ဦးနှောက် Struct Funct (2013) 218: 59-7210.1007 / s00429-011-0376-z [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
158 ။ Zhao နှင့် T-, Huang က GB ကို, Muna အက်စ်အက်စ်, Bagalkot TR, Jin က HM, Chae HJ, et al ။ အပြုအမူနှင့် choline acetyltransferase အပေါ်နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု, 78-KDA ဂလူးကို့စ-စညျးမဉျြးစညျးကမျးပရိုတိန်းနှင့် CCAAT / Enhancer-binding ပရိုတိန်း (ကို C / EBP) အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် homologous ပရိုတိန်း၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) (2013) 228: 217-3010.1007 / s00213-013-3028-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
159 ။ Sailaja BS, Cohen ကို-Carmon: D, Zimmerman, G, Soreq H ကို, HDAC4 အားဖြင့် acetylcholinesterase ၏ Meshorer အီးစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုမှတ်တမ်းမှတ်ဉာဏ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ (2012) 109: E3687-9510.1073 / pnas.1209990110 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
160 ။ Kaufer: D, Friedman တစ်ဦးက, Seidman S က, Soreq အိပ်ချ်ထူးခြားသောစိတ်ဖိစီးမှု cholinergic ဗီဇစကားရပ်များတွင်ကြာရှည်အပြောင်းအလဲများကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ သဘာဝတရား (1998) 393: 373-710.1038 / 30741 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
161 ။ Pavlovsky L ကို, Bitan Y ကို, Shalev H ကို, Serlin Y ကို, mouse ကို hippocampus အတွက် Friedman အေစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲ cholinergic-glutamatergic interaction က။ ဦးနှောက် Res (2012) 1472: 99-10610.1016 / j.brainres.2012.05.057 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
162 ။ Fahlke ကို C, ခက်, E, Eriksson CJ, အိန်ဂျယ်ဂျာဟာ adrenalectomized ကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုအပေါ် corticosterone သို့မဟုတ် dexamethasone မှရေရှည်ထိတွေ့မှု၏ Hansen အက်စ်အကျိုးဆက်များနှင့် type ကိုငါနှင့်အမျိုးအစား၏အကျိုးသက်ရောက်မှု II ကို corticosteroid အဲဒီ receptor ရန်။ Psychopharmacology (Berl) (1995) 117: 216-2410.1007 / BF02245190 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
163 ။ Uhart M က, Wand GS ။ စိတ်ဖိစီးမှု, အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်: လူ့သုတေသနတစ်ခု update ကို။ စှဲလမျးသူ Biol (2009) 14: 43-6410.1111 / j.1369-1600.2008.00131.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
164 ။ Sinha R. စွဲ relapse အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍ။ Curr စိတ်ရောဂါကုသမှုကိုယ်စားလှယ် (2007) 9: 388-9510.1007 / s11920-007-0050-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
165 ။ Sinha R ကို, Catapano D ကို, ကိုကင်းမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် O'Malley အက်စ်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တဏှာနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု။ Psychopharmacology (Berl) (1999) 142: 343-5110.1007 / s002130050898 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
166 ။ Pins အရေအတွက်အနေနဲ့လည်းဂျာ Haass-Koffler CL, Bito-Onon J ကိုလီ R ကို, Bartlett SE ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် Mifepristone အီသနော-ရှာ၏ yohimbine စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement လျော့နည်းစေသည်။ Neuropsychopharmacology (2012) 37: 906-1810.1038 / npp.2011.268 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
167 ။ de Vries တီဂျေ, Schoffelmeer AN, Tjon GH, Nestby P ကို, Mulder AH, Vanderschuren LJ ။ Mifepristone စိတ်ကြွဆေးမှရေရှည်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးကာကွယ်ပေးသည်။ EUR J ကို Pharmacol (1996) 307: R3-410.1016 / 0014-2999 (96) 00308-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
168 ။ et al Deroche-Gamonet V ကို, Sillaber ငါ Aouizerate B, Izawa R ကို, Jaber M က, Ghozland S က။ ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုလျှော့ချဖို့အလားအလာပစ်မှတ်အဖြစ် glucocorticoid အဲဒီ receptor ။ J ကို neuroscience (2003) 23: 4785-90 [PubMed]
169 ။ Fiancette JF, Balado အီး, Piazza PV, Deroche-Gamonet V. Mifepristone နှင့် spironolactone ကွဲပြားခြားနား C57BL / 6J ကြွက်တွေမှာကင်းသွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျားပြောင်းလဲပစ်။ စှဲလမျးသူ Biol (2010) 15: 81-710.1111 / j.1369-1600.2009.00178.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
170 ။ Mesripour တစ်ဦးက, Hajhashemi V ကို, Rabbani အမ် Metyrapone နှင့် mifepristone ကြွက်များတွင်အလိုအလျောက်မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှု reverse ။ အခြေခံပညာ Clin Pharmacol Toxicol (2008) 102: 377-8110.1111 / j.1742-7843.2007.00183.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
171 ။ Jacquot ကို C, Croft က AP, Prendergast MA, Mulholland P ကို, ကို Shaw စင်ကာပူဒေါ်လာ, Little က HJ ။ ရေရှည်အရက်သောက်ခြင်းမှဆုတ်ခွာ၏အကျိုးဆက်များအပေါ် glucocorticoid ရန်, mifepristone ၏ဆိုးကျိုးများ။ အရက် Clin Exp Res (2008) 32: 2107-1610.1111 / j.1530-0277.2008.00799.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
172 ။ Koenig HN, သံလွင် MF ။ အဆိုပါ glucocorticoid အဲဒီ receptor ရန် mifepristone ကန့်သတ်လက်လှမ်းအခြေအနေများအောက်တွင်ကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ Psychoneuroendocrinology (2004) 29: 999-100310.1016 / j.psyneuen.2003.09.004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
173 ။ Lowery ဥပမာ Spanos M က, Navarro M က, လီယွန်လေး, Hodge CW, သီရဲလ် TE ။ CRF-1 ရန်နှင့် CRF-2 agonist အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုး၏လွတ်လပ်သော C57BL / 6J ကြွက်တွေမှာမူးရူးကဲ့သို့အီသနောအရက်သောက်လျော့ကျသွားသည်။ Neuropsychopharmacology (2010) 35: 1241-5210.1038 / npp.2009.209 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
174 ။ O'Callaghan MJ, Croft က AP, Jacquot ကို C, Little က HJ ။ အဆိုပါ hypothalamopituitary-adrenal ဝင်ရိုးနှင့်အရက် preference ကို။ ဦးနှောက် Res Bull (2005) 68: 171-810.1016 / j.brainresbull.2005.08.006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
175 ။ ယန်က X, ဝမ်က S, ဆန် KC, Munro, CA, Wand GS ။ နှစ်ခု mouse ကိုမျိုးကွဲအတွက်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အီသနောစားသုံးမှု။ အရက် Clin Exp Res (2008) 32: 840-5210.1111 / j.1530-0277.2008.00632.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
176 ။ Sharrett-ကွင်းဆင်း L ကို, ဘတ္ TR, Berry ဟာဖြစ်မှု, Reynolds က AR, Prendergast MA ။ Mifepristone pretreatment Vivo အတွက်အီသနောဆုတ်ခွာပြင်းထန်မှုလျော့နည်းစေသည်။ အရက် Clin Exp Res (2013): 10.1111 / acer.12093 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
177 ။ Johanssen S က, Allolio ခ Mifepristone (ru 486) ကုရှင့်ရောဂါပါ။ EUR J ကို Endocrinol (2007) 157: 561-910.1530 / EJE-07-0458 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
178 ။ DeBattista ကို C, Belanoff ဂျေအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်များ၏ကုသမှု mifepristone များအသုံးပြုမှု။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Endocrinol Metab (2006) 17: 117-2110.1016 / j.tem.2006.02.006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
179 ။ Gallagher P ကို, Watson က S, အဲလစ်ဇဘက်ဆိုးဆေးကို C, Young က AH, စိတ်ကြွရောဂါနှင့် schizophrenia အတွက် cortisol ပမာဏအပေါ် mifepristone ၏ Nicole Ferrier ဗြဲ Persistent သက်ရောက်မှု (ru-486) ။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res (2008) 42: 1037-4110.1016 / j.jpsychires.2007.12.005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
180 ။ Gallagher P ကို, Watson က S, စမစ်က MS, Ferrier IN, Young က AH ။ schizophrenia အတွက် neurocognitive function ကိုနှင့်ရောဂါလက္ခဏာပေါ်တွဲဖက် mifepristone (ru-486) အုပ်ချုပ်ရေးဆိုးကျိုးများ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2005) 57: 155-6110.1016 / j.biopsych.2004.10.017 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
181 ။ Gallagher P ကို, Young က AH ။ စိတ်ကျရောဂါနဲ့ရူးဘို့ Mifepristone (ru-486) ကုသမှု: အကုထုံးဂယက်တစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်။ အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါ dis ရယူထားသော (2006) 2: 33-42 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
182 ။ Wulsin AC အ, Herman JP, ရှောလမုန်ကို MB ။ Mifepristone စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူလျော့ကျခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုမှ neuroendocrine နှင့်ဗဟို hypothalamic-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုးတုန့်ပြန် modulates ။ Psychoneuroendocrinology (2010) 35: 1100-1210.1016 / j.psyneuen.2010.01.011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
183 ။ Young ကလေး။ စိတ်ကျရောဂါများအတွက် Antiglucocorticoid ကုသမှု။ Aust NZJ စိတ်ရောဂါကုသမှု (2006) 40: 402-510.1080 / j.1440-1614.2006.01813.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]